October 2010 | TechSectors
Online ပေါ်မှာ လည်ပတ် သွားလာမယ် ဆိုရင် Password တွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို အရေးစိုက်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော် Passwords များ လုံခြုံရေး သတိပြုနိုင်ကြစေရန် - သင့် Password မည်မျှ ကြံ့ခိုင်ပါသနည်း ?? စတဲ့ ခေါင်းစဉ်မျိုးတွေနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးသလို မြန်မာမိသားစုဝင် တော်တော်များများလည်း တစ်ယောက်တစ်အားနဲ့ ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေး ခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို အကြောင်းအရာ ဆိုတာမျိုးက အကြံပြုတာသာ ဖြစ်ပြီး လိုက်ပါ လုပ်ဆောင်မယ် - မဆောင်ဘူး ဆိုတာ ကာယကံရှင် ပေါ်မှာသာ မူတည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့တော့ ဘယ်လိုမှ ဖန်တီးပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး - တစ်ချို့ကတော့ Online accounts တွေ ထားရှိတဲ့ နေရာမှာ Passwords တွေ ပုံစံတူပဲ ဖြစ်စေ - ဆင်တူယိုးမှားပဲ ဖြစ်စေ မသုံးချင်ကြပါဘူး - ဒါပေမယ့် အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ( Passwords တွေ များလာတဲ့ အခါ မှတ်ရခက်ခဲမှာ စိုးတာ ဖြစ်စေ - အလုပ်ရှုပ် မခံချင်တာ ဖြစ်စေ ) Passwords တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဆင်တူယိုးမှာ သုံးနေကြရတုန်းပါပဲ - အဲတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ အခက်အခဲကို ပြေလည်အောင် ဘယ်လို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါမလဲ ??
ဒီ မေးခွန်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော်လည်း တော်တော်လေး စဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုနဲ့ ဟိုတစ်လောက Mozilla ရဲ့ Security Team ကနေပြီး Animated video တစ်ခု နဲ့ လွှင့်ပြတဲ့ Passwords ပြဿနာရဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Online accounts အားလုံး အတွက် တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ထပ်တူ မညီတဲ့ Strong passwords တွေ ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ - မှတ်မိလွယ်အောင်လည်း ဘယ်လိုမျိုး လုပ်ဆောင်နိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ ဗွီဒီယိုလေး တစ်ခု သွားကြည့်မိခဲ့ပါတယ်။
သူ့ Idea လေးကတော့ ရိုးပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်မှာ လက်ကိုင်ထားတဲ့ ဆိုးရိုးစကား ဖြစ်ဖြစ် - ဆောင်ပုဒ် ဖြစ်ဖြစ် ရှိတယ် ဆိုကြပါစို့ - ( ဥပမာ အနေနဲ့ " Help Others to Help Yourself. " - ဒီလိုဆို ဒီစာကြောင်းကနေ အစ စကားလုံး အားလုံး ဆွဲထုတ်လိုက်ပါမယ် - ဒီလိုဆို hothy ဆိုပြီး ဖြစ်သွားပါပြီ။ ) အဲ့နောက်မှာမှ ကိုယ့် Password ကို ပိုခိုင်မာ သွားစေဖို့ တစ်ခြား ကိုယ်နှစ်သက်ရာ Special characters ကြိုက်ရာ စာလုံးကို ဆွဲထုတ်ပြီး ခုနက ရခဲ့တဲ့ hothy ရဲ့ ရှေ့နောက်မှာ ထပ်ပေါင်း ကပ်လိုက်ပါမယ်။ ဒီလိုဆို ( ခုလိုမျိုး #hothy! ဖြစ်သွားပါပြီ ) - အဲ့နောက်မှာ နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ စာလုံးရဲ့ ရှေ့တွဲ ဒါမှမဟုတ် နောက်တွဲ စာလုံးလေး တစ်ချို့ ထပ်ကပ်ပါမယ်။ ဒီ ရှေ့တွဲ ဒါမှမဟုတ် နောက်တွဲ စာလုံးတွေကိုတော့ ကိုယ် Login ဝင်ရမယ့် Website name ကနေ ထုတ်ယူပြီး ပေါင်းပါ့မယ်။
လိုရင်းကို အတိုချုံးရရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်နေတဲ့ Password ဟာ နောက်ဆုံးမှာ Amazon.com အတွက်ဆိုရင် ခုလိုမျိုး #hothy!AmZ ဆိုပြီး ဖြစ်မယ် - တကယ်လို့ Facebook အတွက်ဆိုရင် #hothy!FbK ဆိုပြီး ဖြစ်မယ် - နောက်ဆုံး Youtube အတွက်ဆိုရင် #hothy!YtB ဆိုပြီး ဖြစ်မယ် စသဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းက မှတ်ရလည်း မခက်သလို တစ်ခြား နည်းတွေထက် စာရင် အများကြီး လုံခြုံမှုလည်း ရှိပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အသုံးပြုနိုင်ကြစေဖို့ လက်ကမ်းမျှဝေရင်း မိသားစုဝင်အားလုံး လုံခြုံအေးချမ်းတဲ့ အနာဂတ်နေ့ရက်များ ရရှိပိုင်ဆိုင် ကြစေဖို့ ဆုမွန်ကောင်းများ ပို့သလိုက်ပါတယ် -
Free E-Books for Web Designers
ခုနောက်ပိုင်း Digital ခေတ်မှာ E-books က တော်တော်လေး ခေတ်စားလာတယ် ဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ စာကြာကြာ ဖတ်မယ်လို့ စိတ်ကူးရင် E-books ကို ကွန်ပြူတာမှာ ဖတ်တာမျိုးထက် စာရွက်နဲ့ Print ထုတ်ပြီး ဖတ်တာမျိုးက လူတိုင်း ပိုပြီး မက်မက်မောမောရှိကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ခါတစ်လေ ကွန်ပြူတာနဲ့ စာဖတ်ရတာ မျက်စိစပ်လာရင် ဖတ်မယ့် အပိုင်း လေး ငါး မျက်နှာလောက်ကို မသုံးတော့တဲ့ တစ်ဖက်လွတ် စာရွက်ကြမ်းလေးတွေ ရှာပြီး Print ထုတ် ဖတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ခု မကောင်းတာက စာရွက်နဲ့ Print ထုတ်ဖတ်ရင် နဂိုမူရင်း E-books မှာ Links ချိတ်ထားတဲ့ နေရာတွေကို Mouse နဲ့ ကလစ်ပေးပြီး အင်တာနက်ကနေ တစ်ဆင့် သွားလို့ ရသလိုမျိုး သွားလို့ မရတော့တာ - တစ်ပိုင်း ကနေ နောက်တစ်ပိုင်းကို ကျော်သွားချင်ရင် လွယ်လွယ်နဲ့ သွားဖို့ အဆင်မပြေတော့တာ - အကြောင်းအရာ တစ်ခု သိချင်ရင် E-books လို ရှာဖွေရတာ မလွယ်တော့တာ - နောက် စာရွက်လှန်ရင် ချော်ချော်သွားပြီး နှစ်ရွက်ပူး လှန်မိတာတို့ တံတွေးဆွတ် လှန်ရတာတို့ - နောက် အရေးပါဆုံး တစ်ချက်က - တစ်နေရာရာ သွားချင်ရင် စာအုပ်ဆို သုံး - လေး - ငါးအုပ် သယ်ဖို့တောင် မလွယ်တဲ့ အချိန်မှာ E-books က အုပ် ၅၀ - ၁၀၀ - ၂၀၀ စသဖြင့် အလွယ်တကူ သယ်လို့ ရနေတာ ဆိုတာမျိုးတွေ စသဖြင့် E-books မှာ အားသာချက်လေးတွေ ရှိပါတယ်။
ခုနောက်ပိုင်းကတော့ E-books ဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာကို မြင်နေရပါပြီ။ ဒီ ပို့စ်မှာတော့ E-books နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အကြောင်း လေးလည်း ပြောရင်း Designers တွေအတွက် ဖတ်ထားသင့်တဲ့ Free E-books တစ်ချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ( ၂၂ ) အုပ်ပါ - အဲ့ဒီ စုစုပေါင်း ( ၂၂ ) အုပ်မှာ တစ်ချို့ စာအုပ်တွေက PDFs အဖြစ် Free Download လုပ်ခွင့် ပေးထားပြီး တစ်ချို့က PDFs အတွက် ပိုက်ပိုက် တောင်းပေမယ့် Online HTML version အနေနဲ့ ဖတ်မယ် ဆိုရင်တော့ စာတစ်အုပ်လုံး Free ဖတ်ခွင့် ပေးထားပါတယ်။
တစ်အုပ်ချင်းစီတော့ ကျွန်တော် မိတ်ဆက်ပေးဖို့ လိုမယ် မထင်တော့ပါဘူး - တစ်နေရာစီ သွားပြီး စာမြည်းနဲနဲ ဖတ်ကြည့် လိုက်ရင် ဘယ်စာအုပ်က ဘာအကြောင်းရေးတယ်ဆိုတာ အလွယ်တကူ သဘောပေါက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
11. Introduction to Good Usability
12. How To Be Creative
13. Why design?
14. The Design Funnel: A Manifesto for Meaningful Design
15. HTML5 Quick Learning Guide
17. A Concise Guide to Archiving for Designers
18. Type Classification
19. Dive Into HTML 5
20. The Web Book
21. Access by Design
22. jQuery Fundamentals
လေ့လာ အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေ -
Cloud computing + Adobe = Project Rome ??
8:20 PM LeaveaComment
Adobe လို့ ပြောလိုက်ရင် ကွန်ပြူတာ သမား အားလုံးနီးပါး ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်နေလောက်ပါပြီ - ဘာလို့လဲဆို သူ့ ကုမ္ပဏီက ထုတ်တဲ့ Products တွေက အဆင့်မြင့်တယ် - Web Design နဲ့ Print အတွက် ထုတ်ထားတဲ့ Desktop based products တွေကလည်း အရမ်းကို အရည်အသွေးကောင်းတယ် - ဒီလို ဘက်စုံဒေါင့်စုံကနေ ဖန်တီးမှု ပေါင်းစုံနဲ့ ကြိုးစားနေတဲ့ Adobe က အခု သူ့ ကုမ္ပဏီက ထုတ်တဲ့ Products တွေကို Cloud computing အတွက်ပါ အသက်သွင်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပြန်ပါပြီ -
Cloud computing လို့ ဆိုလိုက်တော့ နားလည်ပြီးသူတွေ အတွက် မဆန်းပေမယ့် လေ့လာစ သူတစ်ယောက် အတွက်တော့ ဆန်းကောင်း ဆန်းနိုင်ပါတယ်။ Cloud computing ဆိုတာ အင်တာနက် ပေါ်မှာ အခြေတည်ထားတဲ့ Computing နည်းပညာရပ် တစ်ခုပါ - ဆိုကြပါစို့ လတ်တလောမှာဆို ကျွန်တော်တို့ စာရေးမယ် - ဓာတ်ပုံတွေ Editing လုပ်မယ် - စာတွေဖတ်မယ် ဒီလိုဆို စက်ထဲမှာ Microsoft word တို့ - ACDsee တို့ - Photoshop တို့ - Adobe Acrobat တို့ ဆိုတဲ့ Software တွေ Install လုပ်ထားဖို့ လိုမယ် - ဒါက ကျွန်တော်တို့ မျက်မှောက်ခေတ် နည်းပညာ။ နောင်တစ်ချိန် Cloud computing လို့ ခေါ်တဲ့ နည်းပညာရပ်ဝန်း အတည်ပြုတိုးတက်လာရင် ဒီလို စာဖတ် - စာရေး - ပြင်ဆင် - ရောင်းချ စတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ ကိုယ့် ကွန်ပြူတာ ထဲမှာ ဘာ Applications မှ Install လုပ်ဆောင်ထားစရာ မလိုတော့ဘူး - စက်ကိုဖွင့်ပြီး အင်တာနက်ထဲကို ဝင်လိုက်တာနဲ့ စာရေးချင်သလား - စာဖတ်ချင်သလား - ပစ္စည်း ဝယ်ချင်သလား - ပစ္စည်းရောင်းချင်သလား - Sharing လုပ်ချင်သလား - အားလုံးကို တိမ်တိုက်ပေါ်မှာပဲ လုပ်ဆောင်လို့ ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါက ဘာနဲ့ တူသလဲ ဆိုတော့ Electricity grid လို့ ခေါ်တဲ့ လျှပ်စစ်ကွန်ရက် တစ်ခု လည်ပတ်လှုပ်ရှားနေတာနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ချင်း ဆင်တူပါတယ်။
ဆိုတော့ Cloud computing ဆိုတဲ့ ခေတ်ကို ရောက်လာရင် Presentation တို့ Project တို့ကို စက်ထဲမှာ Application မရှိပဲလည်း အင်တာနက်ထဲ တက်ပြီး တစ်ခြား သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း Collaborate လုပ်လို့ ရပြီ - Software တွေ Information တွေကိုလည်း တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ - စက်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အင်တာနက်ထဲမှာတင် ဖလှယ်လို့ ရပီ - ဒီစကားကို ပြောလိုက်တော့ ကိုလင်း စကားဝိုင်းမှာ ပြောပြောနေတတ်တာ တစ်ခုတောင် သွားသတိရမိသေး - လိပ် + ပက်ကျိ + ခရု = အင်တာနက် ဆိုတာနဲ့တော့ Cloud computing က ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့ -
Cloud computing ကို အခြေချနိုင်ဖို့ Google ကလည်း Google Apps ဆိုပြီး Clod computing အတွက် လုပ်နေတာ ၁၀ နှစ်ကျော်လောက် ရှိပြီ - Microsoft ကလည်း သူနဲ့ အပြိုင် Free online storage ဆိုပြီး 25 GB နဲ့ Sky Drive မှာ ပေးထားတယ်။ ဒါကို ပေးထားတာ အလကား မဟုတ်ဘူး - ဒီ Free online storage ကို သုံးပြီး SkyDrive နဲ့ အတူ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Office Web Apps ကို သုံးစေချင်တာ - ဒါတင်မက Microsoft Office 365 ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ အမြဲ သုံးနေကျ Microsoft Office, SharePoint Online, Exchange Online ဆိုတာတွေကို Cloud computing ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် အောက်ထဲကို ပစ်ထည့်ပြီး Online မှာတင် သုံးနိုင်အောင် Oct. 19, 2010 က တရားဝင် ကြေငြာ လိုက်ပြီ။ ဒါတင်မက သူတို့ နဲ့ အပြိုင် Acrobat.com ကလည်း အားကျမခံ cloud-based product တွေကို မိတ်ဆက်နေပါသေးတယ်။
ဥပမာ ပြောရရင် Buzzword သူက Acrobat.com ကနေ တင်ဆက်ထားတဲ့ Cloud-based product - Online word processor တစ်ခုပါ - အဲ့နောက်မှာ Acrobat လို့ ပြောလိုက်ရင် လူတိုင်း တွဲသိကြတဲ့ Photoshop - သူ့ကိုလည်း Photoshop Express ဆိုပြီး Cloud-based product - Online image editor အဖြစ် အသွင်ပြောင်းနေပြီ - ဒါတွေ ရှိလာတော့ ဘာထူးလာသလဲ ?? ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ - ဘာ Apps မှ စက်ထဲ ထားထားဖို့ မလိုတော့ဘူး - ကိုယ်က Photoshop သမားလား - ဓာတ်ပုံတွေ ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ချင်နေသလား ဒါဆို Photoshop Express ကို သွားလိုက်ယုံပဲ - စာရေး - စာဖတ် - Presentation လုပ်ချင်သလား ဒါဆို Buzzword တို့ Docs.com တို့ Microsoft Office 365 တို့ Google docs တို့ ဆိုတာတွေဆီ သွားလိုက်ယုံပဲ - အားလုံးကို ကျွန်တော်တို့က Apps သုံးစရာ မလိုပဲ Browser ကနေ လုပ်ဆောင်နိုင်နေပါပြီ - အရင်လို Hard Disk ပမာဏ အများကြီး ဝယ်ပြီး Apps တွေ သိမ်းထားဖို့ - Windows partition ကို Apps များများ install လုပ်ဆောင်နိုင် ဖို့ဆံ့အောင် ပမာဏ များများ ထားဖို့ ဆိုတာတွေ မလိုတော့ ဘူး -
အခုလည်း Adobe ကနေ နောက်ဆုံး Design tool တစ်ခုကို Project Rome ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ စင်တင်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ အဲတော့ Project Rome ကို သုံးပြီး ဘာတွေ ဖန်တီးနိုင်မလဲ ??
Project Rome နဲ့ အတူ ကျွန်တော်တို့တွေ Presentations တွေ - Scrapbooks နောက် - Flash based websites စတာတွေ အများအပြား ဖန်တီးလို့ ရပါမယ်။ အထက်မှာ ဖော်ပြထားတာ Project Rome ကိုသုံးပြီး Business Card တစ်ခု ကျွန်တော် အကြမ်းခြစ်ထားတာပါ - ဒီ Online version - Project Rome ကို သုံးရင် ဘာမှ Install လုပ်ဆောင်ဖို့လည်း မလိုဘူး - Browser ရှိရင် အားလုံး လုပ်ဆောင်လို့ ရပြီ - ခက်ခက်ခဲခဲ ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး လည်း ဘာမှ မပါဘူး -
စပြီ ဆိုတာနဲ့ သူ အသင့် ဖန်တီးပေးထားပြီးသား Library ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Templates တွေနဲ့ လုပ်ချင်သလား - ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ဘာသာ Blank canvas တစ်ခုနဲ့ စချင်လား - ကြိုက်သလို စတင်လို့ ရပါမယ်။ အထဲမှာ စာရိုက်ဖို့ - Shapes တွေဆွဲဖို့ - Freehand drawings လုပ်ဖို့ Built-in tools တွေလည်း အမြောက်အများ ပါဝင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စိတ်ကြိုက် တိုက်ရိုက် ယူသုံးယုံပါပဲ -
နောက်ပြီး အဲ့ဒီ့ သူထည့်ထားပေးတဲ့ Tools တွေနဲ့က Google Images တို့ YouTube တို့ Google Maps တို့နဲ့ အကုန်လုံး ချိတ်ဆက်ထားတာ မို့လို့ တစ်ခုခု လိုတာ ရှိရင် တစ်ခုပိတ် တစ်ခုဖွင့် လုပ်ဖို့ မလိုဘူး - အသင့်ယူသုံးယုံပါပဲ - အဲလို Images တွေကို ရှာဖွေတဲ့ နေရာမှာ Creative Commons licenses အောက်မှာ ရှိပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာအတွက်ပါ ရယူသုံးစွဲနိုင်တဲ့ Images တွေကိုပါ အလိုလျောက် ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေအပြင် Project Rome မှာ လုပ်ဆောင်လို့ ရတဲ့ တစ်ခြား Features တွေလည်း မြောက်များစွာ ပါဝင်နေပါသေးတယ်။ Project Rome နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် အကြမ်းဖျဉ်း အနေအထားကို အောက်ဖော်ပြပါ Video မှာ လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Project Rome အပါအဝင် တစ်ခြား Cloud-based product တွေတော်တော်များများကလည်း လတ်တလော အခြေအနေမှာ စမ်းသပ် ပြင်ဆင်ဆဲ ကာလမို့လို့ Free ပေးထားပါသေးတယ်။ နောင်တစ်ချိန် Cloud computing အကြောင်း ဒီ့ထက်ပို ဂရုပြု ထင်ရှားလာချိန်မှာတော့ သေချာပါတယ် - Free မရနိုင်တော့ပါဘူး - ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာတြွေပင်ဆင်ထားဖို့ လိုမလဲ ?? ပိုက်ဆံ ပိုရှာမလား ?? ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုး နည်းပညာ မြင့်လာအောင် တည်ဆောက်ယူမလား ?? ဒီ အခြေအနေကို ကျွန်တော်တို့ မလွဲမသွေ ရင်ဆိုင် ရပါလိမ့်တော့မယ်။
Navigating The RAM Maze
ဒီအကြောင်းအရာက Profile မှာရော စာချွန်လွှာနဲ့ပါ ကိုချစ်သားငယ်လေး မေးထားလို့ တစ်ခြား မိသားစုက လေ့လာလိုသူတွေလည်း သိနိုင်အောင် ဒီနေရာမှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အတိုကောက် ခေါ်ကြတဲ့ RAM ဆိုတာ Random Access Memory ဆိုတာတော့ ကွန်ပြူတာနဲ့ ရင်းနှီးထိစပ်နေသူ တော်တော်များများ သိကြပါတယ်။ အတိုကောက် ပြောကြရင်တော့ Memory ပေါ့ - သူက ကွန်ပြူတာတစ်လုံးကို ဘယ်လို ကူညီသလဲ ?? နားလည်လွယ်အောင် ပြောရရင် တကယ်လို့ RAM ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းထဲက မှတ်ဉာဏ်လိုမျိုးပဲ ကျွန်တော်တို့ စာမေးပွဲတွေ ဖြေကြတယ် - ဘာသာရပ်နဲ့ ဆိုင်တာတွေကို သေသေချာချာ ကျက်မှတ်ထားခဲ့ရင် စာမေးပဲွ ဖြေတဲ့ အခါ ကိုယ်ကျက်မှတ်ထားတွေကို စာအုပ် ပြန်ကြည့်စရာ မလိုပဲ လက်တန်း မှန်မှန် ဖြေဆိုနိုင်တယ် - မကျက်ထားတဲ့သူက မဖြေနိုင်ဘူး - စာကျက်တယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ Memory ဆိုတဲ့ ခေါင်းထဲကို Hard Disk ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက စာတွေ လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ အသုံးချနိုင်အောင် Data တွေ ခဏ သိမ်းထားလိုက်တာပါပဲ - အဲလို သိမ်းထားလိုက်တော့ စာမေးပွဲ ဖြေတဲ့ အချိန်မှာ Hard Disk ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို Access လုပ်စရာ မလိုပဲ ခေါင်းထဲမှာ အလွယ်တကူ ရှိနေတဲ့ Memory ထဲက စာတွေ အလွယ်တကူ ထုတ်ရေးချလို့ ရသွားတယ် - အဲ့မှာ နောက်တစ်မျိုး အနေနဲ့ စာမကျက်ထားတဲ့ ကျောင်းသား တစ်ယောက် စာမေးပွဲ ဖြေမယ် - သူက ခုနက ပြောခဲ့သလို စာမကျက်ထားတော့ Hard Disk ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက စာတွေက Memory ဆိုတဲ့ သူ့ခေါင်းထဲကို ရောက်မလာဘူး - ပြောရရင် လူမို့လို့ ခေါင်းရှိပေမယ့် သူ့ ခေါင်းက Memory မတပ်ထားတဲ့/Memory မရှိတဲ့ ခေါင်းနဲ့ တူသွားတယ် - အဲတော့ စာမေးပွဲ ခန်းထဲ ရောက်ရင် မေးလာတဲ့ စာတွေကို သူ့ Memory ကနေ ပြန်ခေါ်လို့ မရတော့ဘူး - အဲတော့ ဒီစာမေးပွဲ အောင်ဖို့ဆို Hard Disk ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက စာတွေကို Access ပြန်လုပ်နိုင်မှ ရတော့မယ် - ဒါကို ကျွန်တော်တို့က စာခိုးချတယ် လို့ ခေါ်ပါတယ် -
ကျွန်တော်တို့ RAM ဆိုပြီး ပြောကြတဲ့ Random Access Memory တွေရဲ့ သဘောတရားကလည်း ဒီလိုပါပဲ - တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာက information တွေ လိုလာတဲ့ အခါ သူက အရင်ဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စာကျက်ထားသူ တစ်ယောက်ဟုတ်မဟုတ် ပြန်စစ်တယ် - ဆိုလိုတာ Memory ရှိမရှိပေါ့ - တကယ်လို့ သူက Memory ကို ရှာမတွေ့ဘူး ဆိုရင် Data တွေကို Access လုပ်နိုင်ဖို့ Hard Drive ရှိရာဆီကို သွားရတယ်။ အဲတော့ ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးမှာ RAM မရှိတာဟာ စာမေးပွဲ ခန်းထဲမှာ စာခိုးချဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ကျောင်းသား တစ်ယောက်နဲ့ တူပါတယ်။ လိုချင်တာတွေ ရှိပေမယ့် လိုအပ်တာတွေကို အလွယ်တကူ Access မလုပ်နိုင်ဘူး - လိုချင်တာရဖို့ သူများတကာက Memory ထဲကဟာလေး နဲ့ ချရေးပြီး လေး ငါး ပုဒ် ပြီးနေချိန်မှာ ကိုယ်က Hard Drive ဆိုတဲ့ စာအုပ်တွေဆီကနေ Access လုပ်နိုင်ဖို့ ဟိုလူ့ကြည့်ရ ဒီလူ့ရှောင်ရ ကွေ့ပတ်သွားနေရတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးဟာ RAM မရှိရင် ဖြစ်ဖြစ် OS ရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ပြည့်မှီအောင် RAM မထည့်သွင်းထားနိုင်ရင် ဖြစ်ဖြစ် စက်က အရမ်းနှေးကွေး လေးလံပြီး လိုလားချက်ပြည့်စုံနိုင်ဖို့ အချိန်အရမ်းပေးရတတ်ပါတယ်။
ဒီလို အဖြစ်အပျက်တွေက အရင်တုန်းက ကွန်ပြူတာ အဟောင်းတွေမှာ တော်တော်များများ တွေ့ရတတ်ပြီး အဲလို ဖြစ်လာရင် သင့်တော်တဲ့ Speed ရအောင် RAM ထပ်တိုးရတာတွေ တစ်ခြား Upgrade လုပ်ဆောင်ရတာမျိုးတွေ လုပ်ပေးရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း RAM ထပ်တိုးတယ် ဘာညာ ဆိုတာ တကယ်တော့ ရိုးရိုး ပမာဏ သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုပါ - သူ့နောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ သိထားသင့်တာတွေ အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်။ RAM မှာမှ Versions တွေ အမျိုးမျိုး ရှိသလို - Speeds တွေလည်း အမျိုးမျိုးရှိပြီး ကွာခြားချက်တွေလည်း အမျိုးမျိုး ရှိပါသေးတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရရင် DDR2 800 RAM နဲ့ 2GB stick တစ်ခုဟာ DDR3 1333 RAM နဲ့ 2GB stick ကို ယှဉ်လိုက်ရင် 2GB ချင်း ပမာဏ တူပေမယ့် စွမ်းဆောင်ရည်ချင်း မတူပါဘူး RAM အမျိုးအစား မတူတာနဲ့ ဘာတွေများ ကွဲသွားသေးတာလဲ - ဒါတွေက ကွန်ပြူတာ သမားပဲ ဖြစ်စေ - ရိုးရိုး ကွန်ပြူတာ သုံးသူ တစ်ယောက် ဖြစ်စေ နားလည်ထားဖို့ သင့်ပါတယ်။
အဲတော့ DDR2 နဲ့ DDR3 ဘာကွာ သလဲ - ဈေးကွက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ DDR memory အမျိုးအစားတွေကို ကြည့်ပြီး တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ကွာခြားချက်လေးတွေ သုံးသပ်ကြည့်ကြရအောင်။
DDR2 နှင့် DDR3 ၏ အကြီးမားဆုံး ကွာခြားချက်များ
၂၀၀၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ Intel ကနေ ပထမဆုံး Core i7 processors ကိုထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အရင်တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ processors တွေ ထုတ်ခဲ့တာပဲ - ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါ ပြောင်းလဲ သွားတာက အဲ့ဒီ processors တွေ နဲ့ အတူ X58 လို့ခေါ်တဲ့ Motherboard chipset အသစ် ကိုပါ တွဲပြီး ပွဲထုတ်လိုက်တာပါ။ အဲ့ဒီ chipset က တစ်စပ်တစ်ဆက်တည်း DDR3 ဆိုတဲ့ နောက်ထပ် Memory မင်းသားတစ်လက်ကို ပါ စင်တင်ပါတယ်။ ပြောရရင် သုံးမျိုးတွဲပြီး အချိန်းအပြောင်း လုပ်ပစ်လိုက်တာ ပေါ့ -
အဲလိုပြောင်းပြီး သိပ်မကြာဘူး နောက် ၂ နှစ်လောက်လည်း နေရော Industry တစ်ခုလုံးကိုပါ DDR3 နဲ့ပဲ တွဲသုံးလို့ ရမယ့် ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် Intel က ပြောင်းပစ်လိုက်တယ်။ ခုဆိုရင် Intel ရဲ့ နောက်ပိုင်းထုတ် processors အသစ်တွေ အားလုံးက DDR3 ကို လက်ခံနိုင်တဲ့ Motherboard ကိုပဲ သုံးလို့ ရတော့တယ်။ အခု AMD motherboards တွေကလည်း DDR3 ကို ချိန်းနေပါပြီ - DDR ဆိုတာ Double Data Rate RAM ကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒီ စာလုံးက ကျွန်တော်တို့သာ အထူးအဆန်း ဖြစ်နေတာ တကယ်တမ်း DDR ဆိုပြီး စမိတ်တဲ့ အချိန်ကနဲ့ တွက်လိုက်ရင် တော်တော်တောင် ကြာလှပါပြီ - Double Data Rate RAM ဆိုတဲ့ သဘောက အရင် SDRAM တွေ Clock cycle တစ်ပတ်မှာ Data Transfer တစ်ကြိမ်ပဲ ပြုလုပ်နိုင်ချိန်မှာ DDR တွေက Clock cycle တစ်ပတ်မှာ Data Transfer နှစ်ကြိမ် ပြုလုပ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော် theoretically ပြောတာပါ။ နောက်ပိုင်း ကွာခြားချက်လေးတွေ လာပါဦးမယ်။
အဲလိုနဲ့ SDRAM နောက် DDR SDRAM သူ့နောက်မှာ DDR2 SDRAM ခု DDR3 SDRAM နောက်ဆုံး DDR4 SDRAM ဆိုပြီး ၂၀၁၂ မှာ ထွက်နိုင်ဖို့ ယာထား ပြီးပါပြီ။ ဒါတွေ အားလုံးက အရင် SDRAM လို့ခေါ်တဲ့ Synchronous dynamic random access memory ကနေ တဖြည်းဖြည်းချင်း ဆင့်ပွားတိုးတက်လာတာ တွေပါ။ ဘယ်လို ဆင့်ပွား တိုးတက်လာတာလဲ ဆိုရင် Clock cycle တစ်ပတ်မှာ Data Transfer ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်သလဲ ဆိုတာပေါ် မူတည်ပြီး သတ်မှတ်လာတာမျိုးပါ။ ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရရင် DDR2 RAM က Cycle တစ်ပတ်မှာ4data transfers လုပ်နိုင်တယ် ဆိုရင် - DDR3 က 8 data transfers လုပ်နိုင်တယ်။ ဒီ့ထက်ရှင်းအောင် ပြောရရင် Clock speed ကို Base အနေနဲ့ 100Mhz ထားပြီးကြည့်ရင် DDR RAM က Bandwidth 1600 MB/s ရှိတဲ့ အချိန်မှာ - DDR2 က 3200 MB/s ရမယ် နောက် DDR3 က 6400 MB/s ရမယ် - ဆိုလိုတာ improvement တွေ ပိုမြင့်လာလေ စွမ်းဆောင်ရည်လည်း ပိုကောင်းလာလေ ဆိုတာမျိုးပေါ့ - ကျွန်တော်တို့ အလွယ်ပြောနေကျ အတိုင်း အများဆုံးက အကောင်းဆုံး ဆိုပြီး အလွယ်ပြောရင်တော့ ခုနောက်ဆုံး DDR3 က အကောင်းဆုံးလို့ ကျွန်တော်တို့ ပြောရမှာပေါ့ -
စွမ်းဆောင်ရည် နှင့် ကန့်သတ်ချက်များ
ဆိုခဲ့သလို DDR3 က အကောင်းဆုံးလို့ ပြောခဲ့တော့ တကယ်ပဲ ထူးထူးခြားခြားကြီး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောင်းလဲ သွားတာမျိုး ရှိလို့လား ? ဒါက တွေးစရာ ရှိလာပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲလောက်ကြီးလည်း မဟုတ်ပါဘူး - ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အတိုင်း memory bandwidth တွေ မြင့်လာတာ ကောင်းတာ မှန်ပေမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာတွေမှာ သုံးနေတဲ့ Programs တော်တော်များများ ( ၉၉ % ) လောက်က memory bandwidth ကျော်လောက်အောင်ထိ overload ဖြစ်တယ် ဆိုတာမျိုး မရှိပါဘူး - အဲတာကြောင့် memory bandwidth မြင့်တယ် မမြင့်ဘူးဆိုတာ Sever တို့ Workstation products တွေအတွက်ပဲ ပိုပြီး သက်ဆိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နောက်တစ်ခု သိထားရမှာက ဘယ်လိုပဲ ကွာတယ် မကွာဘူး ဆိုဆို လူ့ သဘောသဘဝ အရ DDR2 နဲ့ DDR3 ယှဉ်လိုက်ရင် ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တယ်ဆို အားလုံးက DDR3 RAM ပဲ ဝယ်ချင်ကြမှာပါပဲ - ဒါပေမယ့် DDR2 နဲ့ DDR3 ဝယ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့် အကြိုက်ကို လိုက်ပြီး ဝယ်ချင်သလိုဝယ်လို့ မရပါဘူး - ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ DDR2 နဲ့ DDR3 က Compatible မဖြစ်လို့ပါ - ဆိုလိုတာ ကျွန်တော်တို့ စက်မှာ သုံးနေတဲ့ Motherboard က DDR2 သုံးနေတဲ့ Motherboard ဆိုရင် ကိုယ့် Motherboard ကို Upgrade မလုပ်ပဲ DDR3 ကို ပြောင်းသုံးလို့ မရပါဘူး - အဲတော့ ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ် ထွက်သွားလဲ ဆိုရင် ကိုယ့်မှာ လတ်တလော သုံးနေတဲ့ DDR2 RAM နဲ့ ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးရှိနေတယ် - ဒါပေမယ့် ကိုယ်က ကိုယ့်စက်ကို DDR3 ပြောင်းသုံးချင်တယ် - ဒီလိုဆိုရင် လတ်တလော ကိုယ့်စက်က အကောင်းကြီး အလတ်ကြီး ရှိနေသေးတဲ့ Processor ရော Motherboard ရောကို ချောင်ထိုးပြီး DDR3 နဲ့ Compatible ဖြစ်မယ့် Processor နဲ့ Motherboard တစ်ခု ထပ်ပြောင်း သုံးရပါလိမ့်မယ်။
ဒီလို ဆိုလိုက်ပေမယ့် တစ်ချို့ Motherboard တွေက ချွင်းချက်အနေနဲ့ ဒီကန့်သတ်ချက်ကနေ ကွဲထွက်သွားတာ ရှိပါတယ်။ အဲတာက ဘာကြောင့်လဲဆို သူတို့တွေရဲ့ Motherboard ပေါ်မှာ DDR2 ရော DDR3 RAM slots နှစ်ခုလုံး ပါဝင်နေလို့ပါ။ နောက်ပြီး ဒီချွင်းချက်ဆိုတာကလည်း Chipsets အဟောင်းတွေမှာပဲ ရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် - ဒီကိစ္စက တော်တော်တော့ ကသိကအောက် နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့လည်း ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး - ကိုယ်တွေက ထုတ်လုပ်သူ မဟုတ်ဘူးလေ - သူတို့ လုပ်တာပဲ ခံရမှာပဲ - ခု ဆို Intel ရော AMD ရောက နောက် Products တွေကို DDR3 RAM နဲ့ ဆက်သွားနေကြပါပြီ - အဲတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့လည်း နောက်ဆို DDR3 တပ်ဖို့ ပုံး အသစ် ထပ်ဆင်ချင်ဆင် မဆင်ချင်လို့ ချစ်တီးကျမယ် ဆိုရင်တော့ အဟောင်းကြီး သုံး ဒီ Options ၂ မျိုးပဲ ရွေးဖို့ ရှိပါတယ်။
Clock Speed အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
အပေါ်မှာ Clock cycle - Clock cycle ဆိုပြီး ပြောခဲ့တော့ Clock cycle ဆိုတာ ဘာမှန်း သိလိုစိတ် ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ Clock cycle ဆိုတာ ခု ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ Clock speed နဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိပါတယ်။ Clock ဆိုတာ ဘာလဲ သူတို့ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်လဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ မဖော်ပြတော့ပါဘူး - အသေးစိတ် သိချင်သူများ ဆရာဇော်လင်း ( Youth ) ရေးတဲ့ A+ Computer Hardware Maintenance and System Administration စာအုပ် အခန်း အမှတ် ( ၃ ) စာမျက်နှာ ( ၄၄ ) မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Clock နဲ့ Clock cycle အကြောင်း မပြောတော့ပေမယ့် RAM နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆက်စပ်နေတာ ပြောရရင် RAM တစ်ခုကို ကြည့်တဲ့ အခါ Clock speed ရဲ့ specification ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆို Clock speed ဆိုတာက Processor တစ်ခု ဘယ်လောက်ထိ အမြင့်ဆုံး စွမ်းဆောင်နိုင်မယ် ဆိုတာ ဖော်ပြသလို RAM ကိုလည်း ဘယ်လောက်ထိ အမြင့်ဆုံး စွမ်းဆောင်နိုင်မယ် ဆိုတာ ဖော်ပြပါတယ်။ အလွယ်ပြောရင်တော့ Clock speed မြင့်ရင် ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ - ဒါပေမယ့် ဟိုးအပေါ်မှာ ရှင်းခဲ့ပြီးသလို ဒီ Clock speed မြင့်တယ် မမြင့်ဘူး ဆိုတဲ့ ကွာခြားချက်တွေက သာမန် ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးကို နေ့စဉ်သုံးနေကျ သူတစ်ယောက် အတွက်တော့ ထူးပြီး မသိသာလှပါဘူး - ဒါတင်မက Memory ကို Clock speed ကန့်သတ်ချက်နဲ့ ပဲ တွဲ သုံးလို့ ရတဲ့ Motherboards ဆိုတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါသေးတယ် - အဲတာကတော့ Motherboard manufacturer ရဲ့ website မှာ ကိုယ်သုံးမယ့် RAM နဲ့ ကိုက်မကိုက် ကြည့်ရမှာပါ။ Motherboards တော်တော်များများကတော့ သိပ်ကန့်သတ်ချက်ရယ် မရှိပါဘူး - ဒါပေမယ့်လည်း ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ စိတ်ထင်သလို တဲွသုံးတာမျိုးထက် သေသေချာချာ လေ့လာပြီးမှ ဆင်တာမျိုးက ပို ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
အနှစ်ချုပ် အနေနဲ့ကတော့ ကျွန်တော် ပြောခဲ့တာတွေဟာ အပေါ်ယံတွေလောက်ပါပဲ - အသေးစိတ် လေ့လာချင်သူတွေ တိတိကျကျ Details သိချင်သူတွေကတော့ ဒီ့ထက်ပိုပြီး လေ့လာသင့်ပါသေးတယ်။ လက်လှမ်းမှီရာ စာအုပ်ကို ဖတ်ပါ။ အင်တာနက်မှာ လေ့လာပါ - ကျွမ်းကျင်သူများကို မေးမြန်းပါ - ကိုယ်တိုင်လည်း စေ့စပ်ပါ - သင်တန်းတွေကိုလည်း အားကိုးပါ။ ဒါဆို ဒီ့ထက် တိကျတဲ့ အချက်အလက်တွေ သိရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Improve Your Typing Skills With Web-Based Typing Tutors
ခင်ဗျား စာရိုက်တာကလည်း နှေးတာဗျာ - လက်ကွက်ပုံစံကလည်း မမှန်ဘူး - ဒီလိုသာ ရိုက်နေ စာတစ်မျက်နှာရဖို့ ခင်ဗျားကို အချိန်ဘယ်လောက်တောင် ပေးရမှာလဲ ??
ဒီ စကားမျိုးတွေက မြန်မာလူမျိုးချင်းချင်းတော့ အားနာတာရော - ယဉ်ကျေးမှု အရရော တော်ယုံ ဘယ်သူမှ ပြောလေ့ မရှိကြ ပါဘူး - ဒါပေမယ့် ကိုယ့်နိုင်ငံ မဟုတ်တဲ့ တစ်ခြား နိုင်ငံကို ရောက်ရင်တော့ ဒီအကြောင်းအရာတွေက စကားပြောလာပြီ - ကိုယ်နဲ့ ရွယ်တူတွေက ကီးဘုတ်မကြည့်ပဲ ဗြောင်းဗြောင်းပြေး ရိုက်နေနိုင်ချိန်မှာ ကိုယ်ကတော့ ကြက်အစာကောက်တာထက် ဆိုးတဲ့ Typing skill နဲ့ ကီးဘုတ်နဲ့မျက်စိ စက္ကန့်မလပ် မခွာနိုင်ပဲ ရိုက်နေတာတောင် ၁ နာရီကို စာ တစ်မျက်နှာ မပြီးချင်ဘူး - ဒီလို အခက်အခဲတွေက ကွန်ပြူတာနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရသူတိုင်း အရင်ဆုံး ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲပါ - နောက်ထပ် ကျွန်တော်တို့မှာ ဆိုးတာက ရိုက်ပါများလို့ အင်္ဂလိပ်လို လက်ကွက်မြန်လာပြီပဲထား - မြန်မာလက်ကွက်က ပြန်ကျင့်ရသေးတယ် - သူတို့နိုင်ငံသား တွေက အင်္ဂလိပ် လက်ကွက် တတ်ရင် ကမ္ဘာပတ်လို့ ရတယ် - ကိုယ်က မြန်မာလက်ကွက်လေးမှ မတတ်ရင် မြန်မာကြားမှာ လူရာမဝင်သလိုလို ( လူရာမဝင်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး အမှန်က သူတို့ ရှလွတ်ရှလွတ် ပြောနေတော့ ကိုယ်လည်း သူတို့လို ကိုယ့်မိရိုးဖလာ ဘာသာစကားနဲ့ မြန်မာလိုလေးရိုက်ပြီး ပြောချင်တာပေါ့ ) - ဒီအခက်အခဲလေးတွေ ပြေလည်စေဖို့ - Typing skill တွေ သွက်လာစေဖို့ ဆိုတာ သူများကျင့်ပေးလို့ မရပါဘူး - ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အားကြိုးမာန်တက်ရိုက်မှ ပြေလည်တာမျိုးပါ - မြန်မာ Typing skill ကတော့ ရှင်းတယ် - Chatting များများတက် အလိုလို မြန်လာရော - :D အဲမှာ တစ်ခု စကားပြောလာတာက အင်္ဂလိပ် Typing skill - အဲတာကလည်း ကောင်းတာကတော့ ကိုယ့်လူမျိုးခြား သူငယ်ချင်းနဲ့ Chatting တက်ရင်း ကျင့်နိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းက ဒီတစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး - နောက်နည်းလေးတွေ ရှိပါသေးတယ် - ဒါ့ကြောင့် Typing skill တက်လာဖို့ ပြင်ဆင်ပေးနိုင်မယ့် နေရာကောင်းလေးတွေကို စုစည်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Typing skill ကျင့်တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကွန်ပြူတာထဲ Install လုပ် ကျင့်လို့ရတဲ့ Software တွေရှိတာတော့ တော်တော်များများ လည်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ - ဒါပေမယ့် Typing skill ကျင့်တယ်ဆိုတာ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ ဘယ်သူမှ အားတက်သရော ကျင့်နိုင်ကြတာမျိုး မဟုတ်လို့ ကျွန်တော့် အနေနဲ့တော့ စက်ထဲ ထည့်ထားပြီး ကျင့်တာထက် အင်တာနက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ free typing tests တွေနဲ့ ကျင့်စေချင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခု ဒီနေရာမှာ စက်ထဲ ဘာတစ်ခုမှ install လုပ်စရာမလိုပဲ အင်တာနက်ထဲမှာ လေ့ကျင့်လို့ ရမယ့် နေရာကောင်းတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ခု ကျွန်တော်တို့ စပြီး Typing skill ကို စနစ်တကျနဲ့ မြန်ဆန်ဖို့ လေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင် -
ကိုယ့်ရဲ့ Typing skill ကို အမှန်တကယ် စနစ်တကျနဲ့ မြှင့်ချင်တာ သေချာပြီ ဆိုရင် ပထမဆုံး ကျွန်တော်တို့ ပြင်ဆင်ရမှာ လက်တလော ကိုယ်ရိုက်နေတဲ့ Typing skill က ဘယ်လောက်ရှိပြီး Score ဘယ်လောက်ရသလဲ ဆိုတာ မှတ်ထားဖို့ပါ။ အင်တာနက်ထဲမှာ Typing skill ဘယ်လောက် မြန်တယ်ဆိုတာ အလကားစစ်ပေးနေတဲ့ နေရာတွေ အများအပြားရှိပါတယ် - အားလုံးရဲ့ ကြားထဲမှာ သဘောကျမိတာတော့ TypingMaster’s Typing Test က ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီး သလိုပဲ Browser ကနေ တစ်ဆင့် Typing Test လုပ်လို့ ရတဲ့ နေရာပါ - သူဖော်ပြထားတဲ့ စာပိုဒ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး မမှားအောင်နဲ့ သတ်မှတ်ထားတ့ဲ အချိန်တွင်းမှာ မြန်နိုင်သမျှ မြန်အောင် ရိုက်ရပါမယ်။ သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ မိနစ်ပြည့်တာနဲ့ ကိုယ့် Typing skill စွမ်းရည် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ - မြန်သလား - အလယ်အလတ်လား - နှေးသလား ဆိုတာ သူဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ ထွက်လာတဲ့ Typing skill result က ကောင်းတယ် ဘာညာဆိုရင် Facebook တို့ Twitter တို့ကိုတင်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ကြွား အဲမှားလို့ Share လုပ်လို့လည်း ရပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် Typing ရိုက်လာတာ ကြာပြီ - ကိုယ့် Typing skill ကိုလည်း ကိုယ်ကိုယ်လည်း မဆိုးလှဘူးလို့ သတ်မှတ်မိပြီ - ခုနက Score လေး ကြည့်ကြည့်တော့လည်း ရလဒ်က မဆိုးဘူးပဲ ဆိုပါတော့ - ဒီလိုဆိုရင် ကိုယ့် လက်ကွက် အနေအထားတွေက အမှန်တကယ်ရော စနစ်ကျရဲ့လား ဆိုတာ ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်သင့်ပါပြီ။ စနစ်မကျတဲ့ လက်အနေအထားနဲ့ ရိုက်နေတဲ့ Typing ဟာ ဘယ်လောက် မြန်ဆန်ပါတယ်ဆိုဆို စနစ်တကျ လက်ကွက် အနေအထားနဲ့ ရိုက်နေသူ တစ်ယောက်ထက် ကြာရှည်မှာ ပိုပြီး နှေးကွေးလေးလံ လာတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စနစ်မကျတဲ့ လက်ကွက် အနေအထားကြောင့် ကြာရှည်မှာ စိတ်ရောလူပါ ပင်ပန်းစေပါလိမ့်မယ်။
TypingWeb.com က ဒီ ဆိုးရွားတဲ့ လက်ကွက် အနေအထားမှားယွင်းမှုတွေကို မှန်ကန်တဲ့ အနေအထားရောက်အောင် beginner level ကနေ စပြီး ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အခြေခံကနေ ပြန်စပြီး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သူပြထားတဲ့ လက်ချောင်း လက်ကွက်အတိုင်း လိုက်နင်းကျင့်ရင် ကျွမ်းကျင်ပြီးသူ လူတစ်ယောက် အတွက် ရက်ပိုင်းအတွင်း မူလ Typing skill ကို လက်အနေအထားမှန်မှန်နဲ့ ပြန်လည် အခြေချမိပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့် လက်ချောင်းတွေ ဘယ်လိုထားရမလဲ ဆိုတာ သိပြီ ဒီလိုဆို နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ ကိုယ့်လက်ချောင်းတွေနဲ့ keyboard ပေါ်က keys တွေ ချိတ်ဆက်မိဖို့ ကြိုးစားရပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ screen ကနေ မျက်လုံး မခွာပဲ ကျလာတဲ့ ဘောလုံးလေးတွေက စာလုံးတွေကို လိုက်ရိုက်ကြည့်ပါ။ တော်တော် မြန်လာတာ သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
လက်အနေအထားကို သိပြီ - ကိုယ့်လက်ချောင်းတွေနဲ့ keyboard ပေါ်က keys တွေလည်း ချိတ်ဆက်လို့ မိပြီ ဒီလိုဆိုရင် နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ Typing speed မြှင့်ရပါမယ်။ ရုတ်တရက် ပေါ်လာတဲ့ စာလုံးတွေကို လက်ကွက် အနေအထား မှန်မှန်နဲ့ လိုက်ရိုက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ - TypeDown က လျှပ်တစ်ပြတ် ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ သူရဲ့ Random စာလုံးတွေဟာ ကိုယ့် Speed နှေးရင် နှေးသလောက် တဖြေးဖြေး မြင့်မြင့်တက်လာပြီး Screen ရဲ့ ထိပ်ကို ထိဖို့ ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို မဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားရမှာပါ - ကြိုးစားကြည့်ပါ။
ကျွန်တော် ခု အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာတွေဟာ စာလုံးရိုက်မြန်အောင် ကျင့်တာမျိုးပဲ ရှိပါသေးတယ် - နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ ဂဏန်းတွေ ရိုက်တာ မြန်အောင် လေ့ကျင့်ရပါဦးမယ် - အဲ့အတွက် လေ့ကျင့်သင့်တဲ့ နေရာကတော့ ဖော်ပြထားတဲ့ TypeOnline ပါပဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားလုံး လက်ကွက် အနေအထားနဲ့ လျင်မြန်မှု ပြည့်စုံပြီ လို့ ဆိုနိုင်ပါပြီလား ဒီလိုဆိုရင် TypeRacer ဆိုတဲ့ ဂိမ်းလေး တစ်ခု ဆော့ကြည့် ကြရအောင်ပါ။
TypeRacer ဆိုတာ ပုံမှန် ကျွန်တော်တို့ ဆော့နေကျ online game ပါပဲ - သူက ပြိုင်ပွဲ ကိုယ်စဝင်ပြီ ဆိုတာနဲ့ တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်းမှာ ကိုယ့်လိုမျိုး ပြိုင်ပွဲ ဝင်လာကြတဲ့ တစ်ခြား player တွေနဲ့ randomly match လုပ်ပေးပါတယ်။ ကိုယ်နှေးရင် နှေးသလို ကျန်ခ့ဲမယ် - မြန်မြန်မှန်မှန် ရိုက်နိုင်ရင် အားလုံးကို ကျော်တက်သွားမယ်။ တကယ်ပျော်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ စမ်းပြိုင်ကြည့်ပါ။
ခုဆို အင်္ဂလိပ်လက်ကွက် Typing skill ကျင့်တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တော်တော်များများ အကြံပြုခဲ့ပြီးပါပြီ - ဒါပေမယ့် မပြီးသေးပါဘူး - ကျွန်တော်တို့က အင်္ဂလိပ်လူမျိုး မဟုတ်တဲ့အတွက် နောက်တစ်မျိုး ကျင့်ရပါဦးမယ် - အဲတာကတော့ မိခင် မြန်မာဘာသာစကား ပါ - မြန်မာလက်ကွက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လေ့ကျင့်နိုင်မယ့် နေရာတွေကတော့ အင်္ဂလိပ်လက်ကွက် လေ့ကျင့်နိုင်သလိုမျိုး အင်တာနက်ထဲမှာ ပေါပေါများများ မရှိသေးပါဘူး - ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သိထားသလောက် ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။
တစ်ခုကတော့ ကိုမျိုးကျော်ထွန်းနဲ့ ကိုမျိုးဟန်ထွန်း တို့ ညီ အစ်ကို နှစ်ယောက် ဖန်တီးထား တဲ့ English Myanmar Typing Tutor ပါ။
တော်တော်လေး အသုံးတည့်တယ်လို့တော့ ပြောလို့ ရပါတယ် - ဘာကြောင့်လည်းဆို မြန်မာစာလက်ကွက်ရော - အင်္ဂလိပ် Typing ကိုပါ ကြိုက်တာရွေးပြီး လေ့ကျင့်နိုင်လို့ပါ။ System Requirements က ဘာတွေလဲ - ဘယ်မှာ Download လုပ်ရမှာလဲ ဆိုတာကတော့ ဒီနေရာကနေသာ သွားကြည့်လိုက်ပါ။ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
နောက် တစ်ခုကတော့ Ko Tin Maung Aye | Web & SEO Specialist ဖန်တီးထားတဲ့ Myanmar Typer ™ Beta Version Myanmar Typing Tutor ခေါ် အွန်လိုင်းမှာ မြန်မာစာလက်ကွက် တိုက်ရိုက် ရိုက်ကျင့်နိုင်တဲ့ နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ကြပါ။
ကျွန်တော် လေ့လာထားမိသလောက်နဲ့ အကြံပြုနိုင်သလောက်ကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ - နောက်ထပ် ကောင်းနိုးရာရာ web-based typing tutors လေးများ သိထားကြရင်လည်း အချင်းချင်း လက်တို့ပေးကြပါဦး -
ကျွန်တော်က ဂိမ်းနဲ့ ပတ်သတ်ရင် တော်တော်ချာတယ် ပြောရမယ် - သူများတကာတွေ သဘောအကျကြီး ကျပြီး ဆော့နေကြတဲ့ dota allstars တို့ - Manager ဂိမ်းတို့ - နောက် Prince of Persia ဘာတစ်ခုမှကို မဆော့တတ်ဘူး - ကျွန်တော် ဘာဆော့တတ်လဲဆို အာလာဒင်တို့ - မာရီယိုတို့ ရမ်ဘိုတို့ပဲ ဆော့တတ်တယ် - ခုနောက်ပိုင်းတော့ နဲနဲ အဆင့်မြင့်လာပြီ - Farmville တို့ Mafia တို့ ဆော့တတ်လာပီ -:D
ခုလည်း ဂိမ်းအကြောင်းရေးမယ် ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်အောက်သာ ဝင်လာတာ နဲနဲတော့ သိမ်ငယ်နေသလိုပဲ :D ဘာမှ ကောင်းကောင်းမဆော့တတ်ပဲ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ရေးစရာ ရှိနေလို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး - ဒီနေ့ နဲနဲ အားနေတာနဲ့ အင်တာနက်ထဲ စာလိုက်ဖတ်ရင်း ထူးထူးဆန်းဆန်း ကလေးဂိမ်းတစ်ခု တွေ့မိလို့ ဆော့စေချင်တာနဲ့ ဝင်ရေးလိုက်တာပါ။ အသက်ကလည်း ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ပဲ ရှိသေးတာ ဆိုတော့ လူကလည်း ကလေးဂိမ်းပဲ ဆော့တတ်တယ်ဗျ
သူက HTML5 ဂိမ်းတစ်ခုပါ - အဲ့တာကြောင့် HTML5 ကို support ပေးတဲ့ Browser နဲ့မှ ဆော့လို့ ရပါမယ်။ လောလောဆယ် ကျွန်တော့် Browser က Firefox 3.6.11 ဆိုတော့ ရတယ် - အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က - version သိမ့်မနိမ့်တဲ့ Browser လည်း ဆော့လို့ ရမယ် ထင်ပါတယ်။
“Galactic Inbox” လို့ အမည်ရတဲ့ ဒီဂိမ်းလေးကို Paul Truong က ဖန်တီးထားတာပါ။ ဖော်ပြပါ နေရာကနေ သွားလို့ ဂိမ်းထဲကို ရောက်သွားရင် အရင်ဆုံး စာပျံလေး တစ်ခု ရမယ် - ပြီးတော့ အဲကောင်လေးက အာကာသထဲ လျှောက်ပျံပြီး ကျောက်ခဲတွေ နဲ့ တစ်ခြား မကောင်းတာတွေကို ဖျက်ဆီးရမယ် - နောက်ဆုံးမှာ boss တစ်ကောင်နဲ့ တွေ့ပြီး ဖြိုခွင်းနိုင်ရင် ဂိမ်းလေးက ပြီးပါပြီ - ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး အပျော်ပါ ဝါသနာပါလို့ HTML5 ဂိမ်းကို ဆော့ကြည့်ချင်သူများ ဆော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ဆော့ကြည့်တာတော့ နိုင်တယ်ဗျ - နိုင်မှာပေါ့ ကလေးဂိမ်းကိုး
2:44 AM LeaveaComment
Antarctica - ကျွန်တော်တို့ မြန်မာအခေါ် အန္တာတိက ဆိုတာ ကမ္ဘာ့တောင်ဘက်ခြမ်း မှာ ရှိနေတဲ့ တောင်ဝင်ရိုးစွန်းဒေသ ဖြစ်ပြီး သူ့ကို တောင်သမုဒ္ဒရာ က ဝန်းရံထားပါတယ်။ သူက ကျွန်တော်တို့ လူသားအများစု နေထိုင်ကြတဲ့ အာရှ, အာဖရိက, မြောက်အမေရိက နဲ့ တောင်အမေရိက ပြီးရင် ပဥ္စမမြောက် အကြီးဆုံးတိုက်တစ်ခုပါ။ ဒီ အန္တာတိကတိုက်ရဲ့ ၉၈% ကို ရေခဲ့ထုတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းထားပြီး သူ့ရဲ့ အထူက ပျမ်းမျှအနေနဲ့ အနည်းဆုံး ၁.၆ ကီလိုမီတာ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အန္တာတိက ဟာ တိုက်တွေ အားလုံးထဲမှာ ရာသီဥတု အဆိုးဝါးဆုံး တိုက်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြသလို ပျမ်းမျှအားဖြင့် တွက်ချက်ရင် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် အမြင့်မားဆုံး တိုက်တစ်ခု အဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ အမြဲပုံမှန် နေထိုင်တဲ့ လူရယ်လို့ အန္တာတိကတိုက်မှာ မရှိပေမယ့် သုတေသနလုပ်ငန်းတွေ အတွက် တိုက်ပေါ်က စခန်းအသီးသီးမှာ နှစ်စဉ်နေထိုင်သူ ၁၀၀၀ ကနေ ၅၀၀၀ ကြားရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Google Street View ဆိုတာ Google Maps နဲ့ Google Earth မှာ ထည့်သွင်းပါဝင်လာတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုပါ။ သူက ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆိုရင် Panoramic လို့ ခေါ်တဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံကို မြင်ကွင်းကျယ် ကြည့်ရှုနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးထားတဲ့ Views လို့ အလွယ်ဆိုလို့ ရပါတယ်။ Panoramic views ကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာအသီးသီးက လမ်းတွေ - အဆောက်အအုံတွေ - တည်နေရာ အနေအထား အသီးသီးကို ကိုယ်တကယ် ရောက်ရှိသွားသလို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်လာပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေ တော်တော်များများ တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ဒီနေရာမှာပဲ နေ - ဒီနေရာတွေပဲ သွား - ဒီအစားအစာတွေပဲ စားနေရ တာ ငြီးငွေ့ဖို့ ကောင်းလိုက်တာလို့များ တစ်ခါတစ်လေလောက် မတွေးမိကြဘူးလား - သေချာပါတယ် - ကျွန်တော်လည်း တွေးမိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ကျွန်တော် တစ်နေရာတည်းမှာ တစ်သမတ်တည်းကြီး အပြောင်းအလဲ မရှိပဲ ငြိမ်နေရတဲ့ ဘဝမျိုးကို ပိုငြီးငွေ့ပါတယ်။ အမြဲ ပြောင်းလဲချင်နေတာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် အသစ်အဆန်းတွေ ကျွန်တော် မြင်ချင်တယ် - ကြားချင်တယ် - ထိတွေ့ကြည့်ချင်တယ် - ကျွန်တော်တို့ မရောက်နိုင် မတွေ့ထိနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့နေရာတော်တော်များများမှာ ရင်သပ်ရှုမောလို့ မဆုံးနိုင်တဲ့ သဘာဝဆေးပန်းချီတွေ ရှိနေမယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် ကျိန်းသေသိပေမယ့် သူတို့ ဘယ်လိုအနေ အထားရှိနေလဲ ?? ဘယ်လိုပုံပန်းတွေ ဖြစ်နေမလဲ ?? ကျွန်တော် အရင်က မသိနိုင်ခဲ့ဘူး - နားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူး - မခံစားခဲ့ရဘူး - အခုတော့ အားလုံး ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပါပြီ -
အခု ကျွန်တော် Google Maps မှာပါတဲ့ Google Street View ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ကျွန်တော် သိပ်ရောက်ဖူးချင်တဲ့ Antarctica ရဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို ကျွန်တော် မြင်နိုင်ပြီ - သိနိုင်ပြီ - ခံစားခဲ့ရပါပြီ။ ဒီအကြောင်းအရာရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ ကျွန်တော် Antarctica နဲ့ Google Street View ကို ယှဉ်တွဲ ဖော်ပြခဲ့တယ် ဆိုတာ တစ်ခုချင်းစီမှာ ရှိတဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက်လေးတွေကို တစ်ခုအကူအညီနဲ့ နောက်တစ်ခု ဘယ်လို လေ့လာသုံးသပ်နိုင်မယ် ဆိုတာ မိတ်ဆက်ပေးချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အန္တာတိကတိုက်မှာ ရှိနေတဲ့ ပင်ဂွင်းလေးတွေကို ကြည့်ချင်ရင် ဒီနေရာကနေ အရင်သွားလိုက်ပါ။ ကျောက်တုံးလေးတွေပေါ်မှာ ရပ်နေတဲ့ ပင်ဂွင်းလေးတွေကို စပြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ မြှားနဲ့ထိုးပြထားတဲ့ Direction လမ်းကြောင်းကို Click ပေးရင် ရှေ့ဆက်သွားရင် မြင်ရမယ့် မြင်ကွင်းတွေကို တစပ်တဆက်တည်း တွေ့မြင်နိုင်ပြီး Left-click နဲ့ Mouse ကို ဆွဲလှည့်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း 360 ဒီဂရီ ရှုမြင်နိုင်ပါသေးတယ်။
ဒီအပေါ်က ပုံကတော့ အန္တာတိကတိုက်မှာ သုတေသနလုပ်ငန်း/လေ့လာရေးခရီး အတွက် ရောက်ရှိနေကြတဲ့ လူတစ်ချို့ပါ။ ကျွန်တော်လည်း သွားချင်လိုက်တာဗျာ -
ခု ကျွန်တော် ဖော်ပြထားတာတွေဟာ အန္တာတိကရဲ့ မြင်ကွင်းအကုန် မဟုတ်သေးပါဘူး - တစ်ခြား လေ့လာနိုင်တာတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ် - ခု နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ Google Maps မှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကရ နေရာ တစ်ခုကို သွားကြည့်ပါဦးမယ်။ ဒါကိုတော့ Record လေးလုပ်ပြီး တင်ပေးထားပါတယ် - လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အရင် တစ်လောက ဖိုရမ်မှာ Google Maps နဲ့ Google Earth ကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချတတ်ချင်လို့ ဆိုပြီး မေးထားတာ လေးတွေ့မိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ Google Maps နဲ့ Google Earth ဟာ Users တွေအတွက် အသုံးပြုရ လွယ်ကူအောင် ဖန်တီးပေးထားတာမို့လို့ ခက်ခက်ခဲခဲကြီး လေ့လာရတဲ့ ဘာသာရပ်မျိုး မဟုတ်ပါဘူး - အင်တာနက်လည်း အနီးနားမှာ ရှိပြီး နေ့စဉ်ဝင်ထွက် အသုံးပြုပါ များလာရင် တဖြည်းဖြည်း အသုံးပြုဖို့ ကျွမ်းကျင်လာနိုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း အကြံပြု လိုပါတယ်။ Google Street View နဲ့ အတူ လေ့လာဖို့ မကုန်နိုင်တဲ့ Google Maps အကြောင်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဖော်ပြရင်း ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ကြစေဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Easy Way Of Learning Ubuntu Command Line
Linux အကြောင်း မရေးတာကြာပြီ - အရင်ရေးပြီးသားတွေတောင် မပြီးသေးတာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ် - ဒါပေမယ့် စိတ်မပါသေးတာကို ဖြစ်ညှစ်ရေးတာထက် စိတ်ဝင်စားတာလေး လေ့လာတွေ့ရှိ ထားတာလေးကို အရင်ရေးတော့ စာဖတ်သူ အတွက်ရော - ကိုယ့်အတွက်ပါ အကျိုးရှိနိုင်မယ်လို့ ယူဆမိတဲ့ အတွက် ဒီ Linux မှာ အရေးပါတဲ့ Command Line အကြောင်း လေး အစပျိုးဖြစ်လိုက်ပါတယ်။
စိတ်ကြိုက် Command များ ဖြည့်သွင်းခြင်း
LinuxCommand - LinuxCommand ဟာ Command Line ကို စတင်လေ့လာသူ တစ်ယောက် အတွက် ဘယ်လို အသုံးပြုနိုင်မယ် ဆိုတာ ဖြည်းဖြည်းချင်း သင်ပြပေးပါတယ်။
O’Reilly’s Linux Command Directory - သူကတော့ Reference guide သဘောမျိုး အသုံးဝင်မယ့် Site တစ်ခုပါ။ သူ့စာမျက်နှာမှာ ဆိုရင် built-in commands တွေတင်မက တစ်ခြား Linux distributions အားလုံးအတွက်လည်း အသုံးဝင်မယ့် အရာတွေ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Beginner သာမက advanced users တွေအတွက်ပါ လေ့လာနိုင်သလောက် အသုံးဝင်ပါတယ်။
The Linux Cookbook - သူကတော့ လေ့လာရင် လေ့လာနိုင်သလောက် နက်နက်ရိှုင်းရိှုင်း ဖော်ပြထားတဲ့ နေရာပါ။
Commandlinefu - သူကတော့ Command line နဲ့ ပတ်သတ်လာရင် ဟင်းလေးအိုးကြီး တစ်အိုးလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် စတင်လေ့လာသူ တစ်ယောက် အတွက်တော့ လေ့လာဖို့ အခက်အခဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ss64.com - သူကတော့ Database and Operating Systems နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Command line reference ပါ။
IBM - သူကတော့ LPIC ( Linux Professional Institute Certification ) အတွက် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ tutorials ကောင်းတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ Site တစ်ခုပါ။
ဒီအကြောင်းအရာကို နည်းပညာအကြောင်းတွေ ရေးသားရာမှာ တောက်တိုမယ်ရာကနေ စပြီး ကြီးကြီးမားမားထိ စေတနာထား ဖော်ပြပေးနေတဲ့ Makeuseof.com ကနေဖတ်ရှုပြီး လိုအပ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပေါင်းစပ် ဝေမျှခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အရင်တုန်းက ရေးခဲ့ပြီးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေမှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရေးခဲ့တာတွေလည်း ရှိသလို - တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန် ဖော်ပြခဲ့တာတွေ - ဖတ်ပြီး ဖတ်ရှုနားလည်တာကို ကိုယ်နားလည်ထားတာတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ရေးသား ခဲ့တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ တတ်နိုင်သမျှ ဖတ်ခဲ့တာတွေကို မျှဝေချင်ပေမယ့် ကျွန်တော် ထင်သလောက် အချိန်မပေးနိုင် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နောက်ပိုင်း ရေးသားသွားမယ့် အကြောင်းအရာတွေမှာ အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်နေတဲ့ မူရင်း Website - နောက် ဆက်စပ်လေ့လာ နိုင်မယ့် Sites တွေကိုပါ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။ ဖော်ပြပေးမယ့် နေရာတွေကို သွားရောက်ပါ - လေ့လာကြည့်ပါ - လေ့လာမိတာတွေကိုလည်း နားလည်သလောက် တစ်ခြားသူအတွက် ဖိုရမ်မှာ ပြန်လည်ဝေမျှပေးကြပါ။ ဒီလို တစ်ယောက် တစ်လက် နဲ့ တစ်တပ်တစ်အား ကူကြရင် များမကြာခင်မှာ ကျွန်တော်တို့တွေ ဒီ့ထက်မြင့်မားတဲ့ စွမ်းရည်တစ်ခုကို ဆုပ်ကိုင် နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
အားလုံး လေ့လာနိုင်သလောက် မျှဝေနိုင်ကြပါစေ
Did You Forget To Reply An Email ?
အရင်နှစ် Oct. 20th, 2009 ခုနှစ်တုန်းက Online ထီ ထိုးရင်း ကျွန်တော် ဒေါ်လာ ၃ သောင်းခွဲ ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆုကြေး ထုတ်ယူနိုင်ဖို့ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း အချိန်မှီ အကြောင်းပြန်ကြားပါဆိုပြီး ကျွန်တော့်ဆီ Mail တစ်စောင်ပါ ဝင်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ အံ့လည်း အံ့သြ - ဝမ်းလည်း ဝမ်းသာ ဖြစ်ပြီး ပျော်မဆုံး ရွှင်မဆုံးနဲ့ အသိတွေကို ညနေပိုင်း သတင်းကောင်း ပြောပြပြီး လိုက်ပြုစုလိုက်တာ ညရောက်တော့ ကျွန်တော်လည်း နဲနဲများသွားပြီး အိပ်ပျော်သွားတယ် - နောက်တစ်နေ့ မနက်ကျတော့ တစ်ခြား အရေးကြီး ကိစ္စတွေရယ် - ညက များထားတဲ့ အရှိန်ကလည်း မသေတော့ Mail ကိစ္စကို လုံးဝ သတိမရတော့ပဲ ဖြစ်သွားတာ သတိပြန်ရတဲ့ အချိန်ရောက်တော့ သတ်မှတ်ရက်ကို ကျော်ပြီး ဆုကြေးပိတ်သွားတဲ့ အချိန်မှ ပဲ ပြန်သတိရမိပါတော့တယ် - ဆုကြေးကိစ္စအတွက် ကျွန်တော် မေ့လျော့သွားလို့ပါ ဆိုတာ ပြေလည်အောင် ပြောပြီး ရယူနိုင်ဖို့ ကျွန်တော် ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာကနေ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း အကြောင်းပြန်ကြားခြင်း မရှိတဲ့ ဆုကြေးငွေ ဖြစ်နေလို့ လက်ခံရယူလိုမှု မရှိ သတ်မှတ်ပြီး လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုကို လှူလိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ပြောကြားလာ ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ ဝမ်းနည်းဖို့လည်း ခက် - ဝမ်းသာဖို့လည်း ခက်တဲ့ ဆုံးရံှုးမှု တစ်ခုပါပဲ။
တကယ်တော့ အထက်ဖော်ပြပါ ဖြစ်ရပ်က တကယ့် အဖြစ်အပျက် မဟုတ်ပါဘူး :D အောက်မှာ ဖော်ပြသွားမယ့် အကြောင်းအရာ အတွက် နားလည်လွယ်အောင် ကျွန်တော့် ဘာသာ လုပ်ဇာတ် တစ်ခု ဖန်တီး လိုက်တာပါ - အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းလိုမျိုး အဖြစ်အပျက်တွေက လူတိုင်း ကြုံဖူးကြတာ မဟုတ်ပေမယ့် ကြုံဖူးတဲ့ သူတွေလည်း ရှိကောင်း ရှိမှာပါ။ ဒီလို ပုံစံတူ ဖြစ်ရပ်မျိုး မဟုတ်တောင် ကိုယ့်ဆီ အကြောင်းကြားစာ ဝင်လာပေမယ့် စောသေးတယ် ဆိုပြီး ဂရုမထားမိလိုက်ရာကနေ လုံးဝမေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်သွားတတ်တဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေတော့ လူတိုင်းနီးပါး ဖြစ်ဖူးကြပါလိမ့်မယ် - ဒီလို ဖြစ်ရပ်မျိုး နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပုံစံတူ သဘောတရားကို Gmail ပို့ချင်တဲ့ အချိန်ပို့ ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ အရင်က တစ်ခါ ကျွန်တော် ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါပြီ - ခု ဖော်ပြမယ့် Services တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို နားလည်လွယ်စေဖို့ အတိုချုံး ဖော်ပြရရင် ကျွန်တော် ဖော်ပြခဲ့သလိုမျိုး အချိန်မတိုင်မီ ရောက်ရှိလာပြီး မိမိကိုယ် မေ့လျော့စေတတ်မယ့် Mail တွေကို သတ်မှတ်ချိန် နဲ့ နီးကပ်လာပြီ ဆိုတော့မှ နောက်တစ်ကြိမ် ကိုယ့်ဆီ ပြန်ဝင်ပြီး အသိပေးအောင် ဖန်တီးပေးတဲ့ လုပ်ဆောက်ချက်မျိုးတွေ ဒီ Services တွေက လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒါတစ်ခုတည်းတင် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ခြား လုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်။ အဲဒီ့ Services တွေကတော့ Laytr နဲ့ Deferred Sender ဆိုတာတွေပါ။
တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ငါ ဒီနေ့ ဘာလုပ်စရာ ရှိလဲ - ဘယ် Mail တွေ ငါ အပြီး ပြန်ရမလဲ - ဘယ်စာတွေ မဖြစ်မနေ ပြန်ရမှာ မပြန်ရသေးလူးလဲ - ဘာတွေကတော့ လုပ်ဖို့ နောက်ကျနေပြီလဲ ဆိုတာ Email ကို အချိန်တိုင်း ဝင်စစ်ပြီး ရှာဖွေ နေရတာမျိုး တွေထက် စာရင် ဒီလို Services တွေ သုံးပြီး လိုအပ်ချိန်မှ အသိပေးခိုင်းတာမျိုးက နေ့စဉ်နေ့တိုင်း စာဝင်/စာထွက် နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စစ်ဆေး လုပ်ကိုင် နေရသူတွေ အတွက်တော့ တကယ်ကို အသုံးတည့်လှပါတယ်။
Laytr ဆိုတာ ကျွန်တော် ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့ အတိုင်း ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ အချိန်ကို မှတ်သားပြီး Emails တွေကို နောက်တစ်ကြိမ် ကိုယ့် Inbox ထဲကို Re-send ပြန်လုပ်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်ကို လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ အဲလို အချိန်သတ်မှတ်ပေးတဲ့ နေရာမှာ ဘယ်လို ဖြစ်စေချင်တယ် ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ အပေါ်ပဲ မူတည်ပါတယ်။ ကိုယ်က နောက် တစ်နာရီလို့ပဲ သတ်မှတ် - သတ်မှတ် ၊ နောက် တစ်နှစ်ကြာမှ လို့ပဲ သတ်မှတ် - သတ်မှတ် မှတ်သားလက်ခံပြီး သတ်မှတ်ချိန်အတိုင်း Emails တွေကို သူက Re-send ပြန်လည် လုပ်ဆောင်ပေးမှာပါ။ Laytr က ခုလို မေ့လျော့ လွယ်တတ်တဲ့ Emails တွေကို နောက်တစ်ကြိမ် အသိပေးနိုင်ဖို့ Re-send ပြန်လည် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကိုပဲ လုပ်ဆောင်တာ မဟုတ်ပါဘူး တစ်ခြား လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ Laytr ကို အသုံးပြုဖို့ အတွက်ဆို Free account တစ်ခုကို Sign up လုပ်ပြီး ဖြစ်စေ - Facebook account နဲ့ပဲဖြစ်စေ အလွယ်တကူ Sign up လုပ်စရာ မလိုပဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Signed up တစ်ခါ လုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီ ဆိုတာနဲ့ Laytr ကနေ ဖန်တီးပေးထားတဲ့ keyword system ကိုသုံးပြီး ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ Emails တွေကို နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ စတင် အသိပေးခိုင်းလို့ ရပါပြီ။ ဥပမာ အနေနဲ့ ဆိုရရင် ဒီနေ့ ရောက်လာတဲ စာကို နောက်တစ်နေ့မှ ပြန်လည်ရယူချင်တယ် ဆိုကြပါစို့ - ဒီလိုဆို tomorrow@laytr.com ကို လိပ်မူပြီး ကိုယ် သတိပေးစေချင်တဲ့ စာကို ပို့လွှတ်လိုက်ပါ - တကယ်လို့ နောက်တစ်လနေမှ အသိပေးစေချင်တာမျိုး ဆိုရင်တော့ nextmonth@laytr.com လို့ လိပ်စာမှာ တပ်ပြီး ပို့လွှတ်လိုက်ပါ - ဒီလိုဆို သတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ အတိုင်း နောက်နေ့ဆို နောက်နေ့ - နောက်လဆို နောက်လမှ စာက နောက်တစ်ကြိမ် ကိုယ့်ရဲ့ Inbox ထဲကို ထပ်မံ ဝင်ရောက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်က နေ့စွဲ - အချိန် တိတိကျကျနဲက အသိပေးစေချင်တာမျိုး ဆိုရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ - oct.20.1600@laytr.com ဆိုပြီး ပို့လွှတ်လိုက်ယုံပါပဲ -
Laytr ရဲ့ အသုံးပြုပုံ keywords အသေးစိတ်ကို ဒီနေရာမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Laytr မှာ ပိုက်ဆံပေးသုံးရတဲ့ Paid နဲ့ အလကား သုံးတဲ့ free accounts ဆိုပြီး နှစ်မျိုးနှစ်စား ရှိပြီး ကွာခြားချက် အသေးစိတ်ကို ဒီနေရာမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသိပေးဖို့ စေလွှတ်နိုင်တဲ့ Emails ပမာဏက ကန့်သတ်ချက် မရှိတာကြောင့် Laytr က တန်ဖိုးထားသင့်တဲ့ free service တစ်ခု ဆိုတာလည်း သေချာလှပါတယ်။
Laytr နဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံချင်း ဆင်တူတဲ့ အခြား service တစ်ခုကတော့ Deferred Sender ပါ - သူကလည်း ကိုယ့်အတွက် မေ့လျော့လို့ မဖြစ်ပဲ နောက်တစ်ကြိမ် အသိပေးဖို့ လိုအပ်မယ့် Mails တွေကို အချိန်မှန် အသိပေးဖို့ စေခိုင်းနိုင်သလို - လတ်တလော မဟုတ်ပဲ နောက်နေ့ရက် တစ်ခုခုမှာမှ ပေးဖို့ချင်တဲ့ စာတွေကိုလည်း Schedule လုပ်ပြီး ပေးပို့ဖို့ ခိုင်းစေထား နိုင်ပါတယ်။ Deferred Sender ကလည်း Free account တစ်ခု Sign up လုပ်လိုက်တာနဲ့ စတင်အသုံးပြုလို့ ရတဲ့ Service ပါ။ ဖော်ပြပါအတိုင်း စာတွေကို နောက်တစ်ကြိမ် Inbox ထဲ ပြန်ဝင်လာပြီး အသိပေးစေလိုတာပဲ ဖြစ်စေ - နောက်အချိန်တစ်ခုမှာမှ Schedule လုပ်ပြီး ပို့လွှတ်စေချင်တဲ့ စာမျိုးတွေကို ဖြစ်စေ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့တွေ deferred@ deferredsender.com ကို Email ပို့လွှတ်လိုက်ယုံပါပဲ။ အဲလို လိပ်မူပြီး Mail ပို့လွှတ်တဲ့နေရာမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Body မှာ Email နဲ့ သတ်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာ အသေးစိတ်ကို ပူးတွဲ ဖော်ပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Message စတင်ရေးသားတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်ပို့လွှတ်ချင်တဲ့ Email address တွေကို အဦးဆုံး ဖော်ပြပြီး သူ့နောက်ကနေမှ ပို့လွှတ်ချင်တဲ့ အချိန်ကို နောက်ဆက်တွဲ ဖော်ပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Email addresses တွေကို CC - BCC အနေနဲ့လည်း ပို့လွှတ်လို့ရပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ နောက်တစ်နေ့ မနက် ၁၁ နာရီမှာ စာတစ်စောင်ကို ကိုယ့်ဆီ ပြန် အသိပေးစေချင်တာမျိုး ဖြစ်စေ - တစ်ယောက်ယောက်ဆီကို နောက်တစ်နေ့ မနက် ၁၁ နာရီမှ ပို့လွှတ်လိုတာ ဖြစ်စေ ဖြည့်သွင်းရမယ့် ပုံစံက အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Deferred Sender ရဲ့ ဒီစာမျက်နှာ ကို သွားရောက်ပြီး နောက်ထပ် အသုံးဝင်မယ့် နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဘယ်လို Schedule လုပ်ပြီး စီမံနိုင်သေးမလဲ ဆိုတာကိုလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခု သတိပေးလိုတာကတော့ Laytr ပဲ ဖြစ်စေ Deferred ပဲ ဖြစ်စေ ဘယ် Service ကိုပဲ အသုံးပြုသည် ဖြစ်စေ နောက်တစ်ကြိမ် အသိပေးစေဖို့ ( သို့တည်းမဟုတ် ) ပို့လွှတ်စေဖို့ Schedule ရေးဆွဲတဲ့ နေရာမှာ အချိန်ကို တိတိကျကျ ရေးသွင်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။ မှားယွင်း လုပ်ဆောင်မိခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ အတွက် တန်ဖိုးထားရမယ့် အကြောင်းအရာတွေ လက်လွှတ်ဆုံးရံှုးနိုင်ပါမယ် ဆိုတာကို အကြံပြု ဖော်ပြရင်း အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။
အရင်တုန်းက ကိုလည်း ငယ့်လိုပဲ သိပ် စိတ်ညစ်ခဲ့ရဖူးတယ် - ကိုကလေ ဘယ်တော့မှ တည်မြဲတဲ့ နေရာမှာ မနေရတဲ့ သူ - အကြောင်းက ဖေဖေ ဝန်ထမ်းဖြစ်နေလို့ - ကို့ကို မွေးတော့ ရန်ကုန် - ကြီးတော့ မန္တလေး - အရွယ်ရောက်တော့ ရန်ကုန် ပြန်ပြောင်း - လူလတ်ပိုင်းမှာ ကျိုင်းတုံ - အခြေတည်တိုင်း အပြောင်းအလဲ တစ်ခု အမြဲ ဖြစ်တဲ့ ဝန်ထမ်းမိသားစု ဘဝကို တော်တော် မုန်းမိတယ် - ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကလေးအတွေးပေါ့ - တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာ ပြောင်းရင် ကိုယ့်အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ခွဲရမှာ စိတ်ညစ်တယ် - ကိုယ်တက်နေကျ ကျောင်း - ပေါင်းနေကျ သူငယ်ချင်းတွေ မတွေ့ရတော့ဘူး ဆိုတဲ့ အသိကလည်း လူကို အထီးကျန်စေတယ် -
အဲ့တုန်းက ကို လေးတန်းအောင် - ငါးတန်းတက်ရမယ့် နှစ် -
မန္တလေး မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်မှာ ရှိတယ် - အထက ( ၂၄ ) တဲ့ - ကို အဲ့ဒီ့ကျောင်းကို သိပ်ချစ်တာ - ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ မိုးတွင်းဆို ခဏခဏ ရေမြှုပ်ပြီး ကျောင်းခဏခဏ ပိတ်ရလို့ - အဲတာလည်း ငယ်ငယ်တုန်းက ကလေး အတွေးပါပဲ - ကျောင်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေ ကို့မှာ အများကြီး ရှိတယ် - အဲ့နှစ်က ထူးထူးခြားခြား ကို လေးတန်းစာမေးပွဲ အတန်းတင် ဖြေတော့ တစ်ကျောင်းလုံး တတိယဆု ရတယ် - ကလေးပဲ ဆုရတယ် ဆိုတော့ ပျော်တာပေါ့ - နောက်ပြီး အဲတာက ပထမဆုံး ရဖူးတဲ့ ဆုလေ - ဒါပေမယ့် ကို ကံမကောင်းခဲ့ပါဘူး - အဲ့တုန်းက ဆု တက်မယူခဲ့ရဘူး - ကိုတို့ ရန်ကုန် ပြောင်းခဲ့ရတယ်လေ - ကိုယ့်ကို သိပ်ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ - ကိုယ် သိပ်ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခွဲရတဲ့ အပြင် ကိုယ်သိပ်တက်ချင်တဲ့ ဆုပေးပွဲလည်း မတက်ခဲ့ရဘူး -
ရန်ကုန်ဟာ ကိုယ့်အတွေးမှာ သိပ်ထည်ဝါမယ် ထင်ထားပေမယ့် - ကိုယ်နေခဲ့ရတဲ့ နေရာက ၁၉၉၅ ခုနှစ် ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း အခြေအနေမှာပါ - ကိုယ်တို့ ပြောင်းခဲ့ကြတာ မိုးတွင်းကြီး - အိမ်ရှေ့ကို ထွက်ရင် ရေက ဒူးခေါင်းလောက် မြှုပ်တယ် - ကျွတ်တွယ်တယ် - လမ်းမတွေက ဘာကတ္တရာ လမ်းမှ မရှိသေးဘူး - မြေနီလမ်းဆိုတဲ့ အဆင့်ထက် နိမ့်တဲ့ ဂဝံလမ်းတွေပဲ - ကားမောင်းလို့ မရသလို စက်ဘီး စီးလို့တောင် မရဘူး -- လမ်းလျှောက်ရင်တောင် မိုးတွင်းဆို ခဏခဏ ချော်တယ် - ခဲတွေက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အနိမ့်အမြင့် မညီဘူးလေ - တက်ရတဲ့ ကျောင်းကလည်း မြို့တည်ခါစဆိုတော့ တော်တော်လေးကို ယိုယွင်းတယ် - အထက ( ၂ ) ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း - ခုတော့လည်း စည်ပင်နေပြီပေါ့ -
ဒီလိုပါပဲ - ဘဝဆိုတာ - ဖြစ်ချင်တာထက် ဖြစ်သင့်တာကို ဦးစားပေးရတယ် - လုပ်ချင်တာထက် လုပ်သင့်တာကို လုပ်နေကြရတယ် - ထူးခြားတာလေး တစ်ခုက ဖြစ်သင့်တာ လုပ်သင့်တာတွေဟာ စလုပ်နေရတဲ့ ကာလမှာ အရမ်း စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းပေမယ့် နောက်ပိုင်း ကျော်လွန်သွားတ့ဲ အချိန်တစ်ခု ကျရင်တော့ အဲ့တုန်းက အဖြစ်အပျက်တွေဟာ ဟာသ တစ်ခုလိုပါပဲ - ငယ်လည်း အခု အခြေအနေသစ် တစ်ခုကို စပြီး ရင်ဆိုင်ရပြီ - အနည်းနဲ့ အများတော့ စိတ်ပျက်မိမှာ အမှန်ပဲ - ဒါပေမယ့် ဒါက အစမို့ပါ ငယ် - ငယ့် စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ချင်တာက ခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခြေအနေ တစ်ခုမဟုတ်ပဲ တစ်ခြားတစ်ခု ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ် - ငယ် ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ထင်တာ ဒါ မဟုတ်ပဲ တစ်ခြား တစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ် - ဒါပေမယ့် အဲတာလေးကို ခဏမေ့ထားပြီး လက်တွေ့ ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ကာလတစ်ခုကို အမှန်အတိုင်း ရှုမြင်လိုက်ပါ - အလုပ်သင့်ဆုံး အရာတွေ လုပ်ကြည့်ပါ - ဖြစ်သင့်တဲ့ အရာတွေ ဖြစ်လာစေဖို့ မလုပ်ချင်တဲ့ အရာတွေကနေ ဖြေးဖြေးချင်း တည်ဆောက်ယူပါ -
အရင်တုန်းက လူသားတွေဟာ လောကကြီးကနေ ကိုယ်လိုချင်တာကို လက်ဖြန့်တောင်းယူလို့ ရသတဲ့ - ဒါပေမယ့် လူဆိုတဲ့ သတ္တဝါက အရမ်းကို လိုလားချက်များလွန်းတယ် - လိုတာ မရ - ရတာ မလိုချင်နဲ့ - အဲလို လူသားတွေရဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေ ခဏခဏ ကြားရဖန် များလာတော့ လောကကြီးကလည်း လူသားတွေကို လိုလားချက် တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဟာ လွယ်လွယ် ကူကူနဲ့ မရနိုင်ပဲ တန်ဖိုးကြီးကြောင်း နားလည်နိုင်အောင် စည်းမျဉ်းတစ်ခု ပြဌာန်းလိုက်တယ် - သူ ထုတ်တဲ့ စည်းမျဉ်းကတော့ -
လိုချင်တာ တစ်ခု ရချင်ရင် မလိုချင်တာ တစ်ခု အရင်ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ စည်းမျဉ်းပဲ
Photo from crispy-apples.tumblr.com
အမြဲတမ်း လိုချင်တာတွေချည်းပဲ ရနေတဲ့ သူတွေက အဲ့ဒီ့ စည်းမျဉ်းလဲ ထွက်ရော ဘယ်လိုမှ အသားမကျနိုင်တော့ဘူး - ငါက ဒါလိုချင်တာကို ဒါပဲပေး - မပေးဘူးလား မင်းမပေးရင် ငါ့ဘာသာ လုပ်ချင်တာ လုပ်ပစ်မှာ ဆိုပြီး လူတော်တော်များများက လိုချင်တာလည်း မရရော သူ့တို့ ထင်ရာ မြင်ရာတွေကို ကောင်းသည် ဆိုးသည် မစဉ်းစားတော့ပဲ စလုပ်ခဲ့ကြတယ် - နောက်ပိုင်း အဲလို လူတွေက ဘာဖြစ်သွားလဲ ဆိုတော့ - လူဆိုး လူမိုက်တွေ - သူခိုင်း ဓားပြတွေ ဖြစ်သွားကြသတဲ့ - လောကကြီးက သတ်မှတ် ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းအတိုင်း လိုချင်တာ တစ်ခုကို ရဖို့ မလိုချင်တာ တစ်ခုကို အရင်ပေးရမယ် ဆိုလည်း ပေးမယ် ဆိုတဲ့ သီးခံစိတ်နဲ့ လုံ့လ ရှိတဲ့ သူတွေကတော့ ကိုယ် ဘယ်လောက်မှ မပေးရသေးခင် ကိုယ်လိုချင်တာ ရအောင် လောကကြီးက ဖန်ဆင်းပေးပြီး လူကောင်း လူတော်တွေ ဖြစ်လာကြတယ် ငယ် - အဲတာကြောင့် ငယ် လိုချင်တာတွေ ဖြစ်ချင်တာတွေ ရဖို့ လောလောဆယ်မှာ သီးခံစိတ်နဲ့ မေတ္တာတရားကို ပေါင်းစပ်ပြီး ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေးဖြေးချင်း ရင်ဆိုင်ကြည့်ပါ -
တစ်ချိန်မှာ အကောင်းဆုံးတွေကို ငယ် ရရှိလာပါလိမ့်မယ် -
12:45 AM LeaveaComment
ကမ္ဘာမြေမှာ ခိုလှုံရာခေါ်ဆိုခဲ့ အိမ်
ရံရွေလယ်ထည်ဝါစွာ ဆင်စွယ်နန်း အိမ်
ကျူထရံတွေကာရံကာ ဓနိမိုး အိမ်
နှလုံးသားတွေ နွေးထွေးရင် ဒါဟာလည်း အိမ်
အိမ်တစ်အိမ်မှာ မှီတည်ရာ ဘာသာတရားတွေ
ကမ္ဘာမြေကို ဖြူစင်စွာ အကြင်နာမျှဝေ
ဆည်းလည်းသံ လှိုက်ခတ်စေ ဒီချစ်ခြင်းတွေ
ကမ္ဘာမြေမှာ အိမ်တစ်အိမ်ကို ဆောက်ကြမယ်လေ
ကမ္ဘာမြေမှာ ညင်သာစွာ စီးဆင်းဖို့လေ
အိမ်အပြင်မှာ ဝါပင်တွေ ကိုယ်တိုင်စိုက်မယ်
ကိုယ်တိုင်ထွန် ဝါချည်မျှင် ဖျင်တဘက်ရယ်
စပါးရိပ်ချိန် ဝိုင်းဖွဲ့မယ် ဆန်အရက်ရယ်
ဒီအချိန်ဆို အိမ်အပြင်မှာ ကဗျာတွေရွတ်မယ်
လာပါကွယ် အိမ်အပြင်မှာ ဂစ်တာတီးမယ်
ရင်ခွင်မှာ ကြင်နာသူ ချိုအနမ်းရယ်
ချစ်မိတ်ဆွေ စည်းချက်ညီ အတူတူကမယ်
ရင်ခွင်မှာ ရှင်သန်ရာ ခိုမှီရာ အိမ်တစ်အိမ်ကို ကမ္ဘာမြေမှာ တည်ဆောက်ကြမယ်
အဆောင်အယောင်တွေ မဆင်ရင်စေ ရင်ခွင်အိမ်ပျော်ရွှင်ပါစေ
ဒဏ္ဍရီရာဇဝင်လို ဝိညာဉ်အိမ် စိန်စီရာ ရတနာခြယ် သိင်္ဂါရီအိမ်
တစေ္ဆတစ်ကောင် ဟန်ဆောင်သလို မာယာကင်းမဲ့
ကံစီရင် ယုံကြည်စွာ ကမ္ဘာမြေမှာ တို့အိမ် ငါတို့အိမ်
ရဲရင့်လိုက် ချစ်တဲ့အိမ် တို့ဆောက်ကြမယ်
တေးဆို - ဓီရာမိုရ်
သံစဉ် - ဓီရာမိုရ်
စာသား - နေထွန်း﻿
အိမ် - ဓီရာမိုရ်
မှတ်ချက် ။ ဒီသီချင်းလေးဟာ "ဓီရာမိုရ်" ရဲ့ "ကျွန်တော်နဲ့ ဂီတ" စီးရီးခွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာ တူရိယာပစ္စည်းများနဲ့ ခေတ်သစ်ဂီတကို ပေါင်းစပ်တီးခတ်ထားတဲ့ သီချင်းခွေလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းခွေလေးကို နား ထောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Globalization Age ဆိုတာကို နည်းနည်း နားလည်လာသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ပြောရရင်... ဒီခွေလေး ဟာ မြန်မာ The Corrs (ဒါမှမဟုတ်) မြန်မာ Blackmore's Night ပေါ့ဗျာ...။ ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေ ကလည်း ချစ်စရာကောင်းလောက်အောင် ရိုးရှင်းပါတယ်။ "အမေ၊ အဝေးကအိမ်၊ ငါတို့အိမ်၊ အိမ်" စတဲ့ သီချင်းခေါင်းစဉ်လေးများနဲ့ ရေးဖွဲ့ ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ နားဆင်ကြည့်လိုက်ပါ။
ဒီသီချင်းရဲ့ အကြောင်းကို အသေးစိတ် ရှင်းလင်းပေးထားတဲ့ Yinmarbin Blog ကစာရေးသူကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
Sharing everything with your comments
Twitter တို့ Facebook တို့ ဆိုတဲ့ Social sites တွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘာလို့ သဘောကျကြသလဲဆိုရင် ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ခဏချင်း မျှဝေလို့ရတာ - နောက်ပြီး ကိုယ်ရေးထားတဲ့ Blog က Posts တွေ တိုက်ရိုက် Publish လုပ်နိုင်တာ - ကြိုက်တဲ့ သီချင်းလေးတွေ Share လုပ်နိုင်တာ - တစ်ချိန်လည်း တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာ ကိုယ့်မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အင်တာနက်တည်းမှာ ဂိမ်းတူတူ ဆော့နေနိုင်တာ စတဲ့ အားသာချက်တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲတော့ ကျွန်တော်တို့ Sharing လုပ်ပြီး သုံးနိုင်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ - ဒါပေမယ့် ကိုယ်သိထားတဲ့ အကြောင်းအရာလေး တစ်ခုကို ကိုယ့် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက်ဆီ Sharing မပေးခင်မှာ ကိုယ်ပိုင်မှတ်ချက်လေးတွေ ထည့်ပြီး ပေးချင်ပြီ ဆို ဘယ့်နှယ် လုပ်ကြမလဲ ?? ဆိုကြပါစို့ - ကျွန်တော်က မြန်မာမိသားစု ဖိုရမ်ကို ရောက်တာ ကြာပြီ - ဖိုရမ်တစ်ခုက ပေးတဲ့ ကောင်းကျိုးလေး တွေလည်း သိပြီ - ဒီတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် အကြောင်းကို သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက်ကို မျှဝေပြီး ဖိတ်ခေါ်ချင်တယ် - သူက ဖိုရမ်ဆိုတာနဲ့ မရင်းနှီးဘူး - ဘယ်လိုသုံးရမယ် ဆိုတာလည်း မသိဘူး - ဘယ်နားမှာ ဘာရှိမှန်းလည်း နားမလည်ဘူး - ဒီလိုဆို ကျွန်တော်တို့ သူ အလွယ်တကူ သိနားလည်နိုင်အောင် အရိုးရှင်းဆုံး နည်းလမ်း - အမြန်ဆန်ဆုံး နည်းလမ်း - အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းနဲ့ ဘယ်လိုမျှဝေနိုင်မလဲ ??
ကောင်းပါပြီ - ခုလို အခက်အခဲ ရှိလာပြီ ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပြီး သိပ်အသုံးတည့်တဲ့ Web app တစ်ခု ရှိပါတယ်။ သူ့နာမည်ကတော့ Markup.io ပါ။ သူက ဘာကောင်းတာလဲ ဆိုရင် Webpage ပေါ်က အကြောင်းအရာကို တစ်စုံတစ်ယောက် ဆီ မျှဝေလိုတဲ့ အခါ ကိုယ်ပိုင် မှတ်ချက်/လမ်းညွှန်ချက် ဆိုတာမျိုးတွေ ပေါင်းစပ်ဝေမျှနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သူ့ကို သုံးပြီး ကြိုက်ရာ Web စာမျက်နှာပေါ်မှာ ကိုယ်လမ်းညွှန်ချင်တဲ့ စာသားလေးတွေ ဖြည့်သွင်းနိုင်မယ် - အရေးပါတဲ့ အပိုင်းလေးတွေကို မြင်သာထင်ရှားအောင် ကွင်းခတ်ဖော်ပြနိုင်မယ်။ ဆက်စပ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မြှားထိုး သိသာစေမယ် - စသဖြင့် ကိုယ်ဝေမျှချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို တစ်ဖက်လူက ချက်ချင်း နားလည် သွားနိုင်အောင် ဖန်တီး ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို လုပ်ဆောင်မယ် ဆိုတာကတော့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Demo လေးကို ကြည့်ကြည့်ပါ -
ကျွန်တော် တစ်ဆင့်ချင်းစီ ပုံရိုက်ပြီး ရေးလို့ ရပေမယ့် ခဏချင်းနဲ့ မြင်သာအောင် Screen recording လုပ်ပြီး ဖော်ပြပေး လိုက်တာပါ - လုပ်ဆောင်နည်း အကြမ်းဖျဉ်း ပြောရရင် Markup.io ဆီသွားပြီး markup.io button ကို browser ရဲ့ bookmarks toolbar နေရာမှာ Drag and Drop ဆွဲချထားလိုက်ပါမယ်။
နောက် ကိုယ် မှတ်ချက်/လမ်းညွှန်ချက် ရေးချင်တဲ့ Site ကို ရောက်ရင် bookmarks toolbar မှာ ရှိနေတဲ့ markup.io button ကို နှိပ် - ရေးသားချင်တဲ့ မှတ်ချက်တွေ - ကွင်းဝိုက် ဖော်ပြချင်တဲ့ နေရာတွေ - စသဖြင့် ပြင်ဆင်ရေးသားနိုင်ပါပြီ။ အားလုံးပြီးသွားရင် Publish ပေးပြီး ရလာတဲ့ Link ကို ကိုယ် မျှဝေလိုသူဆီ ပေးပို့လိုက်ယုံပါပဲ -
အသေးစိတ်ကို ဗွီဒီယိုမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ လုပ်ဆောင်နေရင်း အမှားတစ်ခု လုပ်မိခဲ့ရင်လည်း Ctrl+Z နဲ့ ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံး ပြင်ဆင်ပြီးသွားလို့ တစ်စုံတစ်ယောက်ဆီ Link မျှဝေတဲ့ အခါ တွေ့မြင်ရမယ့် ပုံစံကို ဥပမာ အနေနဲ့ ဒီနေရာမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Markup.io ဟာ IE6ကလွဲရင် Browsers အားလုံးနဲ့ တွဲဖက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး Download ချစရာလည်း မလို Install လုပ်ဖို့လည်း မလိုတဲ့ Web app တစ်ခုပါ။ Free လည်း Free ပါ - ကျွန်တော့် အမြင်တော့ အင်တာနက် ပေါ်ကနေ ကိုယ် ဖော်ပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို တစ်ယောက်ယောက် မြင်သာသိသာအောင် ဖော်ပြဝေမျှတဲ့ နေရာမှာ အသုံးဝင်တဲ့ Web app တစ်ခု အဖြစ် သုံးသပ်မိပါတယ်။
လေ့လာနိုင်သမျှ မျှဝေနိုင်ကြပါစေ -
3:14 AM LeaveaComment
ကျုပ်တော့ ခင်ဗျားတို့ကို နည်းနည်းလေးမှ ကြည့်မရချင်ဘူး -
ခင်ဗျားတို့ကလေ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာစကားကို နည်းနည်းလေးမှ မလေးစားကြဘူး - အထင်လည်း မကြီးကြဘူး - အထင်ကြီးရ ကောင်းမှန်းလည်း မသိကြဘူး - ခင်ဗျားတို့တွေ ကိုယ့်ဘာသာစကား မဟုတ်တဲ့ တစ်ခြား ဘာသာစကားကို သူတို့ နိုင်ငံသားလို ပြောနိုင် ရေးနိုင် ဆွေးနွေးနိုင်တာကို ကျုပ် လေးစားပါတယ် - ဂုဏ်ယူပါတယ် - အဲလိုဖြစ်အောင် အားထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို တကယ်လည်း ချီးကျူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့တွေ ကိုယ့်နိုင်ငံသား အချင်းချင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ မျှဝေမှုတွေ လုပ်ဆောင်တဲ့ အခါ မလိုအပ်ပဲ အင်္ဂလိပ်လို မပြောကြစမ်းပါနဲ့ - ခင်ဗျားတို့တွေက မျှဝေတာတော့ မှန်ပါရဲ့ - ဒါပေမယ့် မင်းဘယ်လောက်တော် သလဲ - ငါ ဘယ်လောက်တတ်သလဲ ဆိုတာ အချင်းချင်း ယှဉ်နေကြသလိုပဲ - ဟိုတစ်လောက မြန်မာတွေ လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အမေးအဖြေ Website လေးတစ်ခု ဝင်ကြည့်မိလိုက်တယ် - မေးတဲ့သူက မြန်မာလို မသိလို့ မတတ်လို့ မေးထားတာကို အင်္ဂလိပ်လို ပြန်မှုတ်ပြီး ဖြေတဲ့သူက ရှိသေးတယ် - အင်္ဂလိပ်လို ပြန်ဖြေတာ ကျုပ် အပြစ်မပြော လိုပါဘူး - ဖြေချင်ဖြေပါ ဒါပေမယ့် မေးမြန်းသူ သိချင်တဲ့ ရလဒ်ပါအောင်တော့ အင်္ဂလိပ်လို ဖြေပေးပေါ့ - ခုတော့ မဟုတ်ဘူး - အဲဒီ့ အင်္ဂလိပ်လို ဖြေထားတဲ့ အဖြေမှာ တိကျတဲ့ ဖော်ပြချက် ပါလားလို့ ကြည့်လိုက်တော့လည်း မပါဘူး - မြန်မာချင်းချင်း မြန်မာလို မေးတာကို အင်္ဂလိပ်လို ဖြေယုံတင် မက မရေရာတာကို ယောင်ဝါးဝါး ဘိုလိုမှုတ်တော့ မေးတဲ့ သူအတွက် ဘာအကျိုးရှိလဲ - ခင်ဗျားမဖြေတာကမှ သူ့ဘာသာသူ ဘယ်သူမှလည်း မဖြေပေးပါလား ဆိုပြီး ကိုယ့်ဘာသာ လိုက်ရှာရင်းနဲ့ သူသိချင်တာလေး ရှာတွေ့ပြီး ပိုအကျိုးရှိကောင်း ရှိဦးမယ် - ခင်ဗျားတို့ သိပါတယ် - ခင်ဗျားတို့ နိုင်ငံသား - ကျုပ်တို့ လူမျိုးတွေ နည်းပညာရပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာမှာ ဘယ်လောက်ထိ နိမ့်ကျနေသေးတယ် ဆိုတာ - တတ်သိနားလည်ပါတယ် ဆိုတဲ့ လူနည်းစုကို လက်ညိှုးထိုးမပြစမ်းပါနဲ့ - တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ကြည့်လိုက်စမ်းပါ - ကွန်ပြူတာရဲ့ အခြေခံကိုတောင် မသိကြသေးတဲ့ သူတွေ လက်ညိှုးထိုး မလွဲအောင် ရှိနေပါသေးတယ် -
ခင်ဗျားတို့တွေ တတ်နိုင်ရင် လက်တစ်ဆုပ်စာ လူနည်းစုရဲ့ အထင်ကြီးတာကို မခံကြစမ်းပါနဲ့ဗျာ - ခင်ဗျားတို့ ဘေးမှာ နည်းပညာ ငတ်မွတ်နေတဲ့ ခင်ဗျားတို့ နိုင်ငံသား - ကျုပ်တို့ လူမျိုးတွေ မရေမတွက်နိုင်အောင် ရှိပါသေးတယ် - ကျေးဇူးပြုပြီး သူတို့ကို ခင်ဗျားတို့လို အရည်အချင်း ရှိလာအောင် တွဲခေါ်ကြစမ်းပါ - မြေတောင် မြှောက်ပေးကြစမ်းပါ - ကျုပ်ဖြင့် အားကို မရဘူး - မြန်မာဇာတ်ကား ကြည့်လိုက်တယ် - ကြီးပွားတဲ့ ချမ်းချမ်းသာသာ မင်းသားဆို ဘယ်က ပြန်လာလဲ စင်ကာပူ - ဘယ်မှာ ကျောင်းတက်လဲ လန်ဒန် - အဲတာ ခင်ဗျားတို့ အားကျရမှာ မဟုတ်ဘူး - ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ ရှက်ရမှာ - ဖြစ်သင့်တာ ကိုယ့်နိုင်ငံ တွင်းမှာ ကိုယ်ပညာသင်ပြီး ကိုယ်တိုင်ကြီးပွားတိုးတက်လာတယ် ဆိုတာ ဖြစ်ရမှာ - ဘာလဲ ခင်ဗျားတို့ ဟိုလူ့ကြောင့်ပါ ဒီလူ့ကြောင့်ပါနဲ့ လက်ညှိုးလျှောက်ထိုးပြဦး မလို့လား - ခင်ဗျားတို့လိုသာ လက်ညိှုးထိုးပြကြကြေးဆို ပါလက်စတိုင်း နယ်မြေမှာ အစ္စရေးနိုင်ငံ ဆိုတာ ပေါ်လာစရာတောင် မရှိဘူး -
ခုတော့ မနေ့တစ်နေ့ကမှ နိုင်ငံခြား ရောက်လာပြီး မြန်မာချင်းတွေ့ရင်တောင် မြန်မာလို မနှုတ်ဆက်ချင်ရတဲ့ သူနဲ့ - သူများ နိုင်ငံသားတြွေကားမှာ မြန်မာချင်းချင်း ခေါ်ပြောရမှာပဲ မဝံ့ရဲသလိုနဲ့ - မြန်မာလို ပြောလိုက်ရင်ပဲ အောက်ကျနောက်ကျ ဖြစ်တော့မလိုနဲ့ - မြန်မာလိုပြောလည်း ဘာမှ မခက်ခဲတဲ့ အကြောင်းအရာကို ဟန်တစ်ခွဲသားကြီးလုပ်ပြီး တည်ဆောက်ပုံ မမှန်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ ဘိုလိုမှုတ်နေတာ ခင်ဗျားတို့ မရှက်ပေမယ့် ကျုပ်တော့ ရှက်တယ် - ကျုပ်တစ်သက်မှာ အင်္ဂလိပ်စကားကို မွှတ်နေအောင် ပြောတတ်တဲ့ မြန်မာတွေ တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ် - သူတို့တွေများ မြန်မာချင်းတွေ့- တော်ယုံ အင်္ဂလိပ်စကား မသုံးပေါင်ဗျာ - ပါးစပ်က အင်္ဂလိပ်လို မတော်လို့ ထွက်သွားရင်တောင် အားနာပြီး ရှက်တတ်ကြတယ် - ခင်ဗျားတို့ကတော့ မဟုတ်ပါဘူး - မြန်မာချင်းချင်း ဘာမှမကြီးကျယ်တဲ့ အကြောင်းအရာကို တခမ်းတနားလုပ်ပြီး " မြန်မာလိုဆို ဘယ်စာလုံး သုံးပြီး ပြောရမှန်း မသိလို့ ဘိုလိုမှုတ်ရပါတယ် " တို့ " မြန်မာစကားကို မသုံးတာ ကြာလို့ ကောင်းကောင်း မပြောတတ်တော့ဘူး " တို့ ပြောတတ်ကြသေးတယ် - အံ့ရောပဲ - ခင်ဗျားတို့ အင်္ဂလိပ်စကား ကျွမ်းကျင်တာ ဖြစ်ဖြစ် - အင်္ဂလိပ်စကားပြော ကျွမ်းချင်တာ ဖြစ်ဖြစ် အင်္ဂလိပ်လို သုံးတာ ပြောတာ ကျုပ် လက်ခံပါတယ် - နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အားလည်း အားပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးပြုပြီး " မြန်မာလိုဆို ဘယ်စာလုံး သုံးပြီး ပြောရမှန်း မသိလို့ ဘိုလိုမှုတ်ရပါတယ် " ဆိုတာမျိုးတော့ မပြောကြစမ်းပါနဲ့ဗျာ - ရှက်တတ်ရင် နေရာမှာတင် အရည်ပျော်ပြီး ပျောက်သွားသင့်တယ် - ကိုယ့်လူမျိုး ဘာသာစကားမဟုတ်တာကျ စကားလုံးမှန်အောင် သုံးတတ်ပြီး မြန်မာလူမျိုး မြန်မာစကားကို ဘယ်စာလုံးသုံးပြီး ပြောရမှန်း မသိတာ ခင်ဗျားက ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်နေတာ ကျုပ်ဖြင့် အံ့သြလို့ မဆုံးဘူး - မွေးကတည်းက နိုင်ငံခြား ရောက်လို့ မြန်မာစကား ကောင်းကောင်း မသုံးတတ်တာမျိုး - ငယ်ငယ်တည်းက နိုင်ငံခြားမှာ သွားနေရလို့ မြန်မာစကားနဲ့ အကျွမ်းတဝင် မဖြစ်တော့တဲ့ သူမျိုးတွေ ကျုပ်ကြုံဖူးပါတယ် - သူတို့တွေ မြန်မာစကား ရေလည်အောင် မပြောနိုင်တာ ကျုပ်လက်ခံလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ ကြည့်တော့ကျ ကျုပ်လိုပဲ A, B, C, D - က၊ခ၊ဂ ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ သင်လာပြီး - ပြီးတော့မှ နိုင်ငံခြား ထွက်လာ - နိုင်ငံခြားလည်း ရောက်ရော မြန်မာစာလုံး မသုံးတတ်တော့ပါဘူး လုပ်ချင်သေးတယ် - ခင်ဗျားတို့ကို Cat - ကြောင် ၊ Dog - ခွေး ဆိုတာ မြန်မာဆရာတွေ သင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ - ခင်ဗျားတို့ သတိရကြစမ်းပါ - ကျုပ်တစ်ယောက် တွေ့ဖူးသေးတယ် - မြန်မာနိုင်ငံက သင်ပေးလိုက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကား နိုင်ငံခြားလည်း ရောက်ရော " ဖွတ်ပဲ " - ဘာမှသုံးစားလို့ မရဘူးတဲ့ - ကျုပ်ဖြင့် အော်ရီပြီး မေးလိုက်ချင်တယ် - ခင်ဗျား A, B, C, D ဆိုတဲ့ စာလုံးတွေ စာရွက်ပေါ် ဆွဲတတ်အောင် ဘယ်လူမျိုး ဆရာမက သင်ပေးခဲ့တာလဲလို့ -
သြော် မြန်မာတွေ မြန်မာတွေ -
ခင်ဗျားတို့ကို မေးရင်တော့ မြန်မာပြည်ကို ချစ်လား - ချစ်၏
မြန်မာလူမျိုး ချစ်သလား - ချစ်၏
ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ လုပ်ရပ်တွေကတော့ လက်ဖျားခါစရာပဲ - ကျုပ်ပြောပြမယ် - ခင်ဗျားတို့ မြန်မာလူမျိုး တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်လူမျိုး - ကိုယ့်ဘာသာစကား - ကိုယ့် ဘာသာသာသနာကို တန်ဖိုးမထားတတ် သေးသရွေ့ကတော့ ကျုပ်တို့ ခင်ဗျားတို့ မြန်မာတွေ နိုင်ငံတကာမှာ ဘယ်လောက်ပဲ ထင်ပေါ်အောင် လုပ်လုပ် - ဘယ်တော့မှ လူရာဝင်လာမှာ မဟုတ်ဘူး - ဘယ်သူမှလည်း ခင်ဗျားတို့ကို လူရာ သွင်းချင်မှာမဟုတ်ဘူး - ခင်ဗျား အရမ်းကြီး တော်နေလို့သာ လေးစားသယောင် ပြချင်ပြမယ် - ခင်ဗျား ဘာလူမျိုးလဲ ဆိုတာ လူပုံအလယ်မှာ ဖောက်သည်ချပြီး ပြောတဲ့ တစ်ချိန် - ခင်ဗျားရဲ့ အရှိန်အဝါက အလိုလျောက် နောက်ကို ရောက်သွားမှာပဲ - လိုအပ်နေတာ ခင်ဗျားတို့လို ရှေ့ရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေ ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ ပညာရှင်တွေ ကိုယ့်လူမျိုးကို တွဲခေါ်ကြဖို့ပါ - ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာစကားရဲ့ ဂုဏ်ကိုမြှင့်တင် ကြဖို့ပါ - လုပ်စမ်းပါဗျာ - ခုလို အခြေအနေကြီးကို လက်မခံကြစမ်းပါနဲ့ - ရှေ့ထွက် မရပ်ချင်ရင်တောင် ကိုယ်ရပ်နေတဲ့ နေရာကို ကိုယ့်လူမျိုးတွေ ရောက်လာစေဖို့ လက်တွဲ ခေါ်ကြစမ်းပါ -
Improve Your Typing Skills With Web-Based Typing T...
Improve your Learning Skills with Youtube Captions
What is the difference between ZIP and RAR ?
Types of recordable DVD formats and DVD-ROM
Self-Learner and Self-Learning
Trade Mark - Only love
Best Annotation Tools on Web Pages
Letters To My Daughter (3)